ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကိုမလိုအပ်ပါဘူးသင္မေ။ ဒီကနေကွဲပြားခြားနားသည်၊အခြားအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ။ တစ်ခုမထားသံုးျပဳသူမ်ားအသုံးပွုနိုငျအားလုံးနီးပါး၏အင်္ဂါရပ်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့ကျနော်တို့လည်းချင်ပါတယ်သောသင်ကိုသတိပေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအာမခံချက်ဗီဒီယိုစကားပြောမည်မဟုတ်နှင့်အတူဆက်စပ်အ လိုက္တယ္။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှစ်ကစားတဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်ရှိအဘို့အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်အသုံးပြုသူများ။ ဒါကြောင့်ပညာရှိဖြစ်မဖြစ်ဖို့နှိုးဆော်သောအခါသင်ပြီးစီးဆက်သွယ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်”လာမယ့်”ခလုတ်ကို။ သင်ထင်လျှင်အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှအချိုးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသတင်းပို့ကျေးဇူးပြုပြီး၊ဒါကြောင့်အသုံးအကြံပေး။ သည္အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူ မီမှတ်ပုံတင်သောပြဿနာများ၊အဖတ်အကြောင်းဆောင်းပါးပါဝင်မှာစကားပြော။ ကမ္ဘာအဝှမ်းမှသာလျှင်၊သင်လုံးဝသက်သာခံစားရပါလျှင်ခွင့်ပြုသင်ရွေးချယ်ဖို့တိကျတဲ့တိုင်းပြည်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်။ သင်သည်ဤလုပ်နိုင်အသုံးၚေနူးရဲ့ထိပ်မှာ။ ကိုနှိပ်ပြီးနောက်၊သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်၏စာရင်းကိုနိုင်ငံအလိုက်အက္ခရာများနှင့်အတူနိုင်ငံတကာအမည်:ဖြစ်ပါတယ်၊သင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အောက်မှာစာတစ်စောင်လျှင်အဖြစ်ဂျပန်-နှင့်၊နှင့်၊နှင့်၊နှင့်။ စကားပြောအစည်းအဝေးမပါဘဲ၊အသံဖမ်းများ၊ဝဘ်ကမ်များခွင့်ပြုပေးရန်အပိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရင်းနှီးသောစကား၊ဒါပေမယ့်သင်ရှက်တတ်ဖြစ်ကြသည်ဆိုရင်၊အသက်ရှင်သောမှတဆင့်ဗီဒီယို၊ကိုယ်ကြိုးစားအရွယ်စာတစ်စောင်အမ်ဳိးဖို့စတင်။ မွီကအခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အခုအလွန်ရေပန်းစား? ထိုသို့မတို့ညှင်းစနစ်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သူတို့ပဲအဆင်ပြေ:ပွင့်လင်းမြင်ဖို့လူများ၊နှင့်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အခြားအသုံးပြုသူများအသွင်ကူးလက်မှတ်။
ချက်တင်ကစားတဲ့ခွင့်ပြုဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အမည်ဝှက်ကိုအသုံးပြုဗီဒီယို၊အသံနှင့်စာသား။ တစ်ဆိုက်အသုံးပြုသူမတော်တဆပေါက်အစိမ်းနဲ့တင်တစ်အွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူ။ သင်ကျေနပ်မှုမဟုတ်အကယ်နှင့်အတူအခြားလူတစ်ဦးကို၊သင်အမြဲထားခဲ့စကားလက်ဆုံနှင့်ရှာတွေ့။ နိယာမ၏ အကိုကျပန်းရှာရန်အတွက်အ ။ စကားပြောသည်အမည်မသိ-အဘယ်သူမျှမအချက်အလက်များရနိုင်အကြောင်းအထောက်အထားနဲ့တည်နေရာတွေကိုဆန့်ကျင်အသုံးပြုသူရဲ့လိမ့်မည်။ အားလုံးချက်တင်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွေကိုလည်းလုံးဝအခမဲ့။ ချစ်ဧည့်သည်များ၊ကျနော်တို့အပြင်တစ်ခုအရေအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုသင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့။ ဒီဆိုက်တွင်သင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဆိုပါလူကြိုက်အများဆုံး ဆိုဒ်များတွင်ဒိန္း၊ကရိန္း၊ဘီလာရုစ်၊အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ဂျာမနီနှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ ကိုယ့်ရွေးတစ်ချက်တင်ချက်တင် အပေါ်တိုက်ရိုက်ဒီဆိုက်။ ေစာရင်းအမြဲအဆင့်မြှင့်တင်မှုဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူ။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်လူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုချက်တင်။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးဆိုက်ဖို့ခွင့်ပြုသောအတွေ့အသစ်ကိုမိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်း။ ဒီဆိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဆိုင်ချက်တင်အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ အဆိုဒ်ရှိစာသားများ၊အသံနှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်း။ ဆိုက်လည်းတစ်ချက်တင်-အတုဘော့-ချက်တင်။ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အသံဖိုင်နှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်၊သင်လိုအပ်အရေနှင့်ကမ်။ သင်စရာမလိုပါလျှင်တစ်ဦးကမ်၊သင်ကစာသားကိုသုံးပါ။ စာသားအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အ ။ သည်အဘို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်းအနားမှာအတူအတုထောက်လှမ်းရေး။ မှကြွလာသောအခါဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များ၊သင်တို့အမြင်နှင့်အကြား၏ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သင်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌။ ဆိုက်လည်းကစားတဲ့နှင့်ဗီဒီယိုချက်တင်၊ခွင့်ပြုသောသင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အများအပြားကလူတချိန်တည်းမှာပင်(လေးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို)။ ဥပမာအားဖြင့်၊ချက်တင်-အကစားတဲ့-ချက်တင်နှင့်အခြားသူများ။ ဗီဒီယိုချက်တင်ခွင့်ပြုမှပြောဆိုရန်အစိမ်းသောအသက်အဝေး၊သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်၊တစ်နေရာရာ အနီးအနား။ ကစားတဲ့စကားပြောခန်း၊သငျသညျအဘယ်သူသည်မသိရပါဘူး၏နောက်စကားလက်ဆုံလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။အချို့ဦးစားပေး(ကျား၊တိုင်းပြည်)။ အားလုံးဗီဒီယိုချက်တင်ပေးအပ်သည်များမှာအခမဲ့ျဖစ္သည္။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်လုံလောက်၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊အလှည့်တွင်သင့်ကမ်နှင့်လက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေ။ ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံအားလုံးနီးပါးအဆိုပါအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုအဘို့အစာရှောင်ခြင်းဗီဒီယို။ သုံးနိုင်မည်ရှာဖို့အခြားတစ်ဝက်ကိုအင်တာနက်ကနေတဆင့်။ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တစ်ဦးအစားထိုးဘို့အကိုဆက်သွယ်ထားသောနှင့်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များငွေယူသည်အသုံးပြုသူများထံမှအမျိုးမျိုးသောအပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့်။ လည်း၊အများအပြားဗီဒီယိုချက်တင်အပေါ်မရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဆက်သွယ်သည့်အခါလူတစ်ဦးနှင့်အတူအ၊သငျသညျလဲလှယ်သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်(ဖုန်းနံပါတ်)၊နှင့်သောနောက်၊ထိုဆက်ဆံရေး၏ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊နှင့်ပင်လက်ထပ်။ အကောင်းကံနှင့်စကားပြောဆိုချက်တွေကိုအတွက်အွန်လိုင်းချက်တင်။
ပူးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိန်းဗီဒီယိုချိန်းတွေ့။။။။။ အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်၊အထားအထိနေ့စွဲနှင့်အတူအားလုံးသတင္းမ်ားနှင့်စျေးနှုန်းကမ်းလှမ်း။ အဘို့အတတ်နိုင်သောအိမ်ရာနှင့်ကိုရှာဖွေတစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်မိနစ်များအတွက်သို့မဟုတ်ကြာကြာ၊သငျသညျအသုံးပွုနိုငျအွန်လိုင်းချက်တင်ကနေတဆင့်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့၊အဘယ်မှာသင်စတင်နိုင်ပါသည်စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်။”အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး”ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူသငျသညျကိုထောက်ပံ့ပေးအရာအားလုံးသင်လိုအပ်သငျသညျသက်သာခံစားရစေပါဖို့။ အသံုးျပဳသူမ်ား၏၊အခမဲ့ဗားရှင်း၊အခြေခံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဆက်သွယ်ကနေတဆင့်တစ်ဦးကမ်။ အခြားဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့နေ့အပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်ထား။ အများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအကြောင်းဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအမ့္မယ္။ ဒီမပုံမှန်ကဲ့သို့အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်း၊သောမှလွဲ။၊အလိုအလြောချိန်းတွေ့ ပထမဦးဆုံးလူတစ်ဦးနှင့်အပေါ်အလမ္း။ ထိုကွာခြားချက်အတွက်လုံခြုံရေး၊ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊နှင့်အလိုအတွင်းမှာနေထိုင်။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်အမြဲတန်ဖိုးအားဖြင့်အသုံးပြုသူများသောကြောင့်၊သူတို့အခွင့်အလမ်းကိုကြည့်ရှုရန်သာမန်လူနှင့်၎င်းတို့၏အဆင့်အတန်း။ ပေါင်းစပ်ပြီးတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူနိုင်ငံခြားမှအများဆုံးဝေးလံခေါင်ဖျားနိုင်ငံများ၊ဒိန္းပေးသည်သင်သင်ယူဖို့အခွင့်အထိုဘာသာစကား၊စိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းတွေနိုင်ငံအတွက်၊ကျင်းပသောအစည်းအဝေးသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သည်ကိုအချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်အောင်ဧည့်ခရီးသွားအတူတူ။ သင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း”အွန်လိုင်း”အစည်းအဝေးကိုအွန်လိုင်း၊သင်ဆက်သွယ်နိုင်အချို့သောအသုံးပြုသူများနှင့်အတူစကားပြောသူတို့အနာဂတ်အတွက်အားဖြင့်အတူတူပင်အရင်းအမြစ်။ အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုမှရှောင်ရှားရန်ဆက်သွယ်နှင့်အတူအခြားအရင်းအမြစ်များနှင့်လူမှုကွန်ယက်နှင့်အာရုံစူးစိုက်။ ကစားတဲ့၏အွန်လိုင်းချက်တင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်သူများကဖန်တီးအဘို့အသာသွေးထွက်သံယိုအစည်းအဝေးနှင့်မိတ်ဆွေတွေကိုရှာဖွေ၊ဒါပေမယ့်လည်းအ ။ သင်သည်ဤနေရာသို့သွားရန်လူတစ်ဦးကနေလာမယ့်မှအောကာ နယူးပြက်လုံးဖျော်ဖြေဖို့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ညဦးယံဖြုန်းကြောင့်လုပ်နေတယ်။ ကစားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအွန်လိုင်းချက်တင်”အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့”-ကယ္တင္ျေနခ်င္တယ္ဆိုမကြိုက်ဘူးတဲ့သူကလူနှင့်တွေ့ဆုံရန်အပေါ်လမ္း။ ဒါဟာတစ်ဦးဖျော်ဖြေမှုအပျြောနိုငျသောယာယီအစားထိုးဖို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးသည္။ အွန်လိုင်းချက်တင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း”ဒိန်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့”ဒိန္းကမ်းလှမ်းတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်အဆင်ပြေလမ်းပေါင်းစပ်ဖို့အလုပ်လုပ်ပေးဇိမ်ခံန္ေဆာင္မႈအတူအပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်။ စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်၊သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အွန်လိုင်းချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်ဖို့ကနေတဆင့်ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်။ လှည့်ကင်မရာကိုအပေါ်သွားတဲ့နေရာကိုစောင့်ဆိုင်းများအတွက်ပထမဦးဆုံး။ တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်သက်ဆိုင်ရာနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသား၏ဘာသာစကားအဆင့်ပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးကရရှိဝဲအမျိုးမျိုးအတွက်လူမှုကွန်ယက်ဘယ်မှာဆွေးနွေးရေးကိစ္စများရှိသည်တဲ့အခါနှလုံးအခြေအနေ။ ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူပိုပြီးအဆင်ပြေပြေဆက်သွယ်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူစကားပြောကျပန်းစကားကလူ။ သွင်အစည်းအဝေး-အခမဲ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ-နှင့်ပို။ ကြားလူအများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်၊လှုပ်ရှားမှုများ၊ဝါသနာ၊ဦးစားပေး။ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုအဘယ်သို့သောအနှင့်အဓိကအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ၏ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေး
ဝက်ဘ်ဆိုက်အခမဲ့အစည်းအဝေးနှင့်အတူနိုင်ငံခြား။ သံသယဝါဒီသို့မဟုတ်ကိုယ့်လျှာကိုမကောင်းသောအဆိုကြသည်ကြောင်းအင်တာနက်ကတဆင့်၊င္ငံျခားရှာကြသည်သောသူအတွက်၊ဒါပေမယ့်ကျိုးနွံလှ ဒါမှမဟုတ်သန့်ရှင်းရေး။ ရှိပါကသင်သည်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ၊သင်သိဘယ်လောက်စစ်မှန်တဲ့ဒီအမြင်သည်။ ခေတ်သစ်အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများအတော်လေးနိုင်စွမ်း၏၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးကိုယ်တိုင်ရှာကြံနှင့်ဝိညာဉ်ရေးထောက်ပံ့မှု၊နူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်နားလည်မှဒိန်းမျိုးသမီး။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန္းအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်င္ငံျခားသားမ်ားအတြက္။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကသင်ကူညီလိမ့်မည်အားလုံးသင်ယူနှင့်ပတ်သက်။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန်းမတ်။ ဒီချိန်းတွေ့ဆိုက်အကန့်အသတ်ဆက်သွယ်ရေး။ ဒီမှာဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်းချိန်းတွေ့နှင့်စစ်မှန်သောပုံပြင်များအကြောင်းချိန်းတွေ့အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေဒီမှာ၊နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး၌သင်တို့၏မေတ္တာနှင့် စေအများကြီးအသစ်။ အဆိုပါ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ချိန်းတွေ့နိုင်တယ်ဆက်သွယ်ရေး၊စာပေးစာ၊ချစ်ကြည်ရေး၊အစည်းအဝေး၊အနက်ဆက်ဆံရေးဖန်တီးဖို့တစ်မိသားစုကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ကိုယ်အဘို့ဆုံးဖြတ်ပါ။ လူတွေ့ဆုံရန်သူအမျိုးသမီးများအတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့-သူတို့နေသော? ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်ရှိသည်ပါဘူးတဲ့အရည်အသွေးအမျိုးသားများထံမှဒိန်းမတ်နှင့်ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု။ ဒီအမျိုးသားများထံမှဒိန်းမတ်၊ပြင်သစ်၊စပိန်အသင်း၊ဂျာမနီက၊နယ်သာလန်၊ဂရိတ်ဗြိတိန်၊ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊သြစတြေးလျ၊ဣနှင့်အခြားနိုင်ငံများ၏ကမ္ဘာ့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အချစ်စုံတွဲတစ်တွဲ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်သင့်ဘဝလက်တွဲဖော်။ မှတ်ပုံတင်ပေးဆောင်တိသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်လေးနက်၏ရည်ရွယ်ချက်။ ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုအိပ်မက်အစည်းအဝေး၏အသိဉာဏ်၊လှပသော၊အကောင်းနှင့်အသိဉာဏ်အမျိုးသမီးနိုင်သူအဖြစ်သစ္စာအ သူမ၏ဇနီး။ အမျိုးသမီးမှဥရောပနှင့်အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေ၊သူတို့မြင်ရ၏စံပြအလတ်အသက်ဝိညာဉ်၊အထိန်းသူ၏အမှုအလုံးစုံနှင့်အစဉ်အလာတန်ဖိုးကိုဖန်တီးဖို့နိုင်မှတစ်အိမ်ဖြစ်လာရန်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအထောက်အပံ့။ သူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်တင်ထားသောသည်အဝက်ဘ်ဆိုက်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခားျပီး၊အသုံးပြုရာ အသုံးပြုချီယောက်ျား၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအနေဖြင့်ကမ္ဘာ၏။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့:ဖြည့်ဆည်းင္ငံျခားသားမ်ား၊ခရီးသြားျခင္း၊အနားယူအတူတူ၊ဘာသာစကားကိုလဲေထင်မြင်ယူဆချက်နှင့်အတွေ့အကြုံများ၊မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်မိသားစုစတင်:ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန္း၊အားလုံးကုပ်ယခုပွင့်လင်း။ ခါအနီရောင်နှလုံးအလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒီအာမခံမပေးပါဘူးသူတို့ကမေတ္တာ၌ကျကြလိမ့်မည်၊သို့သော်ထိုသို့မပါဘဲအတြက္၊အလေ့အကျင့်၊ထိုဆက်ဆံရေးအလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်တယ်သို့မဟုတ်ပြဿနာတွေထသောအနောက်ပိုင်းမှာအဆင့်မှာ။ လျှင်လိုက်ဖက်မသည်အလွန်ကောင်းလှ၏၊ကြောင်းဖတ်ပြဿနာများကိုသူတို့မျက်နှာ-ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ဖြစ်နိုင်သည်သူတို့နှင့်အတူအသက်ရှင်နေထိုင်။ အတွင်းအစည်းအဝေးနှင့်အတူင္ငံျခားသားမ်ား၊သုံးလုံးလိုအပ်သောဆိုလိုသည်သိမှရရန်သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပိုကောင်း။ အခမဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်နှင့်အတူနိုင်ငံခြား။ ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်မသာမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်၊ဒါပေမယ့်လည်းလူတစ်ဦး၏အိပ်မက်များ၏။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန္းသည်လူကြိုက်များပြီးမကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်နိုင်ငံခြား။ ဒါကြောင့်သင်သေချာဖြစ်၊ ကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်ဒီအခါသင်တို့မှတ်ပုံတင်နှင့်ဖန်တီးကိုယ္ေ။ ကိုယ့်ကြိုးစား။ သတိရ-ကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မည်သင်၏အဝတ်နှင့်အတူလိုက်ပါရန်အတွက်သင်၏အကြံအစည်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့အနာဂတ်၊ထိုအခါဝက်၏အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံသည်မထွက်၊မပေါ်ကျောက်ပျင်းရိခြင်းမရှိကြကိုရွေးချယ်ပါ၊သင်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံနှင့်သင်သူတို့ကိုပြသအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဘုန်းအသရေ။ နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊အဆင်သင့်ဆက်သွယ်ဖို့ရော၊ဆိုက်ပေါ်တွင်နှင့်လူတစ်ဦးအတွက်။ ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားသွင်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်နိမ့်ဆုံးမှကြောင့်တည်းသာအသက်ရှင်ချက်တင်ပြီးခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်၊သင်တစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အဘို့အကိုယ့်ကိုယ်ကို-သင့်ရဲ့လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်မဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရှိသင်အတွက်အောင်မြင်မှုရှာဖွေစိတ်ဝင်စားစရာအဖော်၊ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးချစ်ခင်ပွန်းကို။ သင်၏အိပ်မက်မြင်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကလေးတစ်ဦးအဖြစ်? အခုဆိုရင်သင်အိပ်မက်၏ပဲရစ်၊ဗင်းနစ်၊သို့မဟုတ်မိုင်ယာ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းစစ်မှန်သောအတူအစည်းအဝေးယောက်ျားကနေအာရပ္ေစာ္ဘြားနုိင္ငံ၊အီတလီ၊ဂျာမဏီ၊ပြင်သစ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန်းမတ်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းကိုရှာတွေ့မှတစ်ဖက်ပြည်ပ ပြည်ပနှင့်၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်၊လက်ထပ်ပြည်ပ။ အသတို့သမီးနှင့်သတို့သားအစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်အားတွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူစကားပြော။ ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုသင်တို့လက်ထပ်ဖို့အလုပ္လုပ္ခြ။ ချိန်းတွေ့ပြည်ပ:အများစုကနိုင်ငံခြားသားများ၊ပင်ကဲ့သို့၊သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ရှာများစွာသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊အလည်အပတ်တစ်ချက်တင်သို့မဟုတ်ဖိုရမ်သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ခုတည်းယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအလည်အပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့အတွက်နေ့တိုင်းရှာ၏သတို့သမီး။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်-သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်တော်တို့အတွက်ငွေမပေးပါနဲ့အီးမေးလ်ရေးသားခြင်း။ ကယ့်လူရှိပါတယ်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုအတွက်ရှာနေကြသူအမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေး။ သင့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုတက်လာသည်။ သင်၏နှုတ်သည်အကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်။ မဘယ်လိုအမှားလုပ်သောအခါအဖော်ရွေးချယ်တဲ့အ? ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချကြောင်းထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်ကံကြမ္မာ? ငါသည်မသိရပါဘူးလျှင်သင်သည်ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပါ”ဟုတ်ကဲ့”သို့မဟုတ်”မလုပ်ပါနှင့်၊”ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့စမတ်အကြံဉာဏ်-။ နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့င္ငံျခားသားမ်ား၊ဘယ်လိုပြောသောအခါနှင့်တွေ့ဆုံရန်”? ဤသည်မူရင်း အီးမေးလ်ပို့ရန်လိပ်စာများ၏တဦးတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မန်နေဂျာ။ အမျိုးသမီးအဘို့အမေးအကြံဉာဏ်သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီမှုကာလအတွင်းရှာ။ အတွက်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးအဖြစ်၊အမှန်တကယ်အသက်တာ၌ရှိပါတယ်၊အသုံးအခြေအနေနိုင်သည့်အတွက်ပေးရှင်းလင်းဖြေ။ အတွက်၊ကျွန်တော်တို့အများစုရှိသည်ကိုလည်းအချိန်မစွမ်းရည်ကိုရှာဖွေဖို့အနည်းငယ်ဘုံအလမ်း။ အင်တာနက်ကြီးစွာသောရာအရပ်ဖြစ်စေအစည်းအဝေးသောအခါဖွံ့ဖြိုးသို့တည်ငြိမ်နှင့်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်-ဤမည်သောအရပ်ကတစ်နေ့အများကြီးတွေ့တစ်ခုတည်းယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအတွက်ရှာနေကြသူသူတို့စာန်သာဒိန္းများအတွက်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကို၊ချစ်ခြင်းနှင့်တစ်မိသားစုမစတင်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုအဆုံးမဲ့အရေအတွက်၏ခွင့်အလမ်းများဆက်သွယ်ဖို့ရှာတွေ့သင့်ရဲ့အနာဂတ်ခင်ပွန်းအကြားတစ်ဦးယောက်ျားအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှု။ တစ်ဦးစံဖြေရှင်းနည်းကိုဖြစ်စေခြင်းငှါဖို့စကား၏ခေါင်းစဉ်အပေါ်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်အညွှန်းပရိုဖိုင်းနူးဂျူး၊ သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်သောသူစိတ်ဝင်စားပြီးသူနှစ်သက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်အားကြိုဆိုရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန်းမတ်။ သူငယ္ခ်င္းသစ္ရွာေဖြျခင္း၊ခရီးသွားလာမှုမိတ်ဖက်နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊ထိုလူအများ၏အိပ်မက်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်အလွန်ရေပန်းစားနှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့၊ဒီတော့မေးခွန်းလွှာဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မည်အာရုံစိုက်ပြီးအများကြီးအဖြေ။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ဒိန္းလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမပေးဆောင်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဖြည့်ဆည်းရန်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၊၏အိပ်မက်လက်ထပ်ရန်၊နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင်ဤနေရာသည်သင့်အတွက်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအလွန်ရိုးရှင်းနှင့်သင်သာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာ။ လျှင်သင်မည်သည့်ပြဿနာမျှကွုံတှေ့ရစဉ်အတွင်းအစည်းအဝေးနှင့်အတူနိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ပါ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့မန်နေဂျာ။ ရှာတွေ့အစားမှာအဓိကသော့ချက်ရန်ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေနှင့်နှိပ်လိုက်ပါ(ဆက္သြယ္ရန္)။ ဖြည့်စွက်အတွက်အဆက်အသွယ်ပုံစံကိုအသုံးျ။။။။။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်ဒိန်းမတ်ကြီးဖန်တီးကူညီဖို့အကောင်းဆုံးစုံတွဲနှင့်ဖြစ်စေရှာ အဖြစ်ရိုးရှင်းဖြစ်နိုင်။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်အများအပြားယောက်ျားမှဥရောပတိုက်၊အယ္ငယ္န္၊ကနေဒါ၊ဗြိတိန်နှင့်သြစတြေးလျသင်ခဲလှ၏တွေ့ဆုံရန်အမှန်တကယ်အသက်တာ၌။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်းအတွက်ဒိန္းသားဖုံးလွှမ်းသုံးဆယ်အမျိုးသားများအတွက်၊ဒါကြောင့်သင်မည်ကဲ့သို့ရှာမည်ဒီမှာအများအပြားအခွင့်အလမ်းများအတွက်လူမှုရေးဘဝနှင့်ရှာဖွေတစ်ဦးဘဝလက်တွဲဖော်။ အားလုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုအတွက်ဒိန္းမိန်းကလေးများအဘို့လုံးဝအခမဲ့ဘို့သင့်ကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်၊အခမဲ့ထုတ်ဝေသင့်ပရိုဖိုင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများ၊အမြင်အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ၊သူတို့ကိုစေလွှတ်မည်တစ်ခုန့်အသတ်အရေအမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အများကြီးပို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံခြားချိန်းတွေ့ဆိုက်ပါရှိသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အရည်အတစ်ခုတည်းယောက်ျား။ သူတို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီကိုသင်နှင့်သင်ဖိတ်ခေါ်ဖို့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေး။ လှပသောအမေရိကန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမန်၊အီတလီ၊အမျိုးသားများအတွက်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်ဘးသင်နှင့်အတူ အာရုံစိုက်။ သူတို့အားငါပေးမည်၊ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သင့်မိသားစုဘဝကို။ ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပွင့်လင်းရိုးသားသောသူတို့နှင့်အတူ။ ဒီအစဉ်အမြဲတန်ဖိုးထားကြသည်။ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နိုင်ပါလိမ့်မည်လက်ထပ်ဖို့အဖစ္ပြားႏႈန္း မျှဝေသူ၏မင်္ဂလာအဇာတ်လမ်းနှင့်အတူ။ စေသင့်ရဲ့အင်တာနေရှင်နယ်အစည်းအဝေးရောက်ရှိရန်ကူညီအသစ်တစ်ခုကိုအဆင့်အကောင်အထည်ထည်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုးတက်မှုနှင့်ခွင့်ပြုမေ့လျော့ဖို့တတ်နိုင်သမျှအနုတ်လက္ခဏာအတွေ့အကြုံအတွက်။ ငါပြော? သောကြောင့်သင်တိုက်ရိုက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ဆြးေႏြးထက်အက္ခရာ? သင်ထင်စကားပြောဖြစ်တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းအတွက်အစည်းအဝေး? ထိုအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အသင်တို့အဘို့။ ယခုသင်အလုပ်လုပ်မသာကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်၊ဒါပေမယ့်လည်းသာတူမည်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းဒါမှမဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်း။ ဒါဟာယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လူတိုင်းအတွက်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောသည်ဒိန်းချိန်းတွေ့ဗီဒီယို(ဒိန်းချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုများယခုတက်ကြွစွာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်နှင့်ပိုမိုအဆင့်မြင့်တဲ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးစနစ်အပေါ်အခြေခံပြီးပွင့်လင်းင့္ႏ)။ ထို့ကြောင့်များကိုချိတ်ဆက်ဖို့၊စကားပြောခန်း၊သင်သာလိုအပ်ဒိယိုလိုင်းချိန်းတွေ့။ သူတို့တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတပါးချိန်းတွေ့စကားပြော၊ငါအများကြီးပိုပြီးတက်ကြွ။…
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖြစ်၏အခြေခံပေါ်မှာနှစ်ခုစံမ်ား:”ရာက္ဖို”နှင့်”အစည်းအဝေး”။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်သင့်ရဲ့ရာက္ဖို၊ထို့နောက်သင်ရုံရန်လိုအပ်ပါတယ်သတ်မှတ်ကိုနိုင်ငံ၊ဒေသနှင့်မြို့။ သင်ကျော်သွားနိုင်တယ်။ အဆင်ပြေရှာဖွေရေးအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအမြန်မာဘာသာသင်ကူညီလိမ့်မည်အလွယ်တကူရှာတွေ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အတွက်ဆက်သွယ်ရေး၊စာပေးစာ၊ချစ်ကြည်ရင်းဒါမှမဟုတ်ချစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာလည်းကူညီရှာဖွေသင့်ရဲ့ရာက္ဖိုနှင့်အတန်းဖော်များ။ ဝင်ရောက်ရှာဖွေသူငယ်ချင်းတွေ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်နိုင်ငံသားတွေ၊အတန်းဖော်များသို့မဟုတ်နဲ့တူ-စိတ်တူကိုယ်တူလူတွေမပါဘဲ။ အခမဲ့အစည်းအဝေးကိုစုဝေးစေနှင့်ကလေးများနှင့်လူငယ်လူရွယ်ဆယ်ပါးသောတဆယ်ခြောက်ယောက်အားရှိသမျှကျော်ကနေ။ ပြီးရိုးရှင်းတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊သင်ကဖြည့်စွက်မှထွက်သင့်ပရိုဖိုင်းအဖြစ်ယူအစိတ်အပိုင်းအတွက်သားသမီးရဲ့အစည်းအဝေး။ သာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူစစ်မှန်သောလူ။
အသံုုးခ်အနေနဲ့မူရင်းဒိန္းဗီဒီယိုစကားပြောသည်စကားပြောနှင့်အစည်းအဝေးနှင့်ဒိန်းမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ။ ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ချိန်းတွေ့အတွက်ဒိန်း-နိုင်ငံခြားရေးကျပန်းစကားပြော။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်၊နှင့်ဤကွာခြားချက်အကြောင်းဒီဗီဒီယိုမှာစကားပြောသင်တွေ့ဆုံရန်လူများ၊အထူးသဖြင့်ဂျာမဏီကနေ။”အကြောင်းကိုပြောကြရအောင်”အသစ်တစ်ခုထူးခြားသောဝန်ဆောင်မှုဖို့ခွင့်ပြုသောဆက်သွယ်ပြောဆိုပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏ကမ္ဘာအနှံ့မှအသုံးချက်တင်၊ကမ်မိုက်။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်ဘဲ။ အခမဲ့ဆက်သွယ်ရေးမှတဆင့်တစ်ဦးကမ်။ တွေ့ဆုံကမ္ဘာအဝှမ်းနှင့်ဗီဒီယိုကိုအွန်လိုင်း။
တိုင်းဒိအမျိုးသမီးအောက်မေ့ကိုဝမ်းနည်းဖွယ်ဇာတ်လမ်းနည်းနည်းမိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေ။ နှင့်ယိုကိုဤဇာတ်ကောင်နေဆဲရပ်တည်မှုအတွက်ဆိပ်ကမ်းဂင်။ ဒိန္းသည်ဗြိတိန်ကျွန်းဆွယ်။ ဤသည်နေအိမ် အများဆုံးနာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းနာင္တြင္ ၊ရေရဲတိုက်၊၊ဘုရားကျောင်းနှင့် ကြောင်းသတိပေးပြီးတိုင်းတစ်မိနစ်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာသမိုင်းဖြစ်ရပ်များ။ နှင့်၎င်း၏မြို့တော်ကိုပင်ဟေဂင်-စဉ်းစားသည်အများဆုံး မြို့တော်၏မြောက်ပိုင်းင္ပါ။ အကောင်းဆုံးနေရာမြင်ယောင်ကြည့်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့အသက်တာ။ ဒါပေမယ့်ကိုသာအတွက်နေရာဒိန္းထိုက်တန်အာရုံစိုက်၊ဒါကြောင့်လည်းတန်ဖိုးရှိမှာရှာဖွေနေများအတွက်ဒိန်းမတ်။ သူတို့သည်နှိမ့်ချပြီးဖော်ရွေမှု၊ဟုတ်မှန်သောအဘ၏အိမ်သူအိမ်သားအကိုးကွယ်။။။။။ အရေးအပါဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့နိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှု၊ပြီးတော့လွယ်ကူသောကြောင့်ကြည့်ဖို့ဒိန်းသို့မဟုတ်ဒိန်းသတို့သမီး။ ယခုစတင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အရိတ္ဒိန္း၊နှင့်မကြာမီသင်အခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်သာမြင်ရဖို့အရုပ်ထုသောသင်တို့ရှိသမျှသည်ငါ့ကလေးဘဝအနီ၊ဒါပေမယ့်လည်းအစီးအသိက္ခာနှင့်အတူသင်ချစ်တဦးတည်းအတွက် ဥယျာဉ်နှင့်ညဦးယံ၌ထိုင်ပေါ်အသဲကမ်းခြေ၏ကြမ်းတမ်းသောရေကန်၌၎င်းတွယ်။ ငါေရြးခ်ယ္ထားေသေးငယ်တဲ့သတင်းစကားများ၊အကြံပြုချက်များကိုသိမှရရန်သူ့ကိုကောင်း၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုအတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်။ သင့်ရဲ့ကံကြိုးစားပါကြောင့်၊နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးအခွင့်အလမ်းကိုပေး။ ချိန်းတွေ့လူတို့ကိုဒိန်းမတ်မှအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်သက်ယောက်ျားကိုဒိန်းမတ်မှ၊ချက်တင်၊ဗီဒီယိုစကားပြောဒိန္း၊ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ အနက်ချိန်းတွေ့၊ဒိန္း၊ချိန်းတွေ့၊နိုင်ငံခြားအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးက၊ချိန်းတွေ့အလေးအနက်၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့၊ဒိန္းဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ဗီဒီယိုကနေချိန်းတွေ့၏အမြင်အဇာ၊ချစ်ပြည်ပ
အမ္ိဳနှင့်သပိတ်နှင့်သံလွင်အာရှရပင်၊ချမ်းအေးအနည်းငယ်နှင့်ရေကန်တိတ်ဆိတ်တဲ့မြစ်ချောင်း၊စိမျ့နှင့်ရေခဲပူးေဇိုင်းပုံစံဝိညာဉ်နှင့်ဆင်တူသည်နေး။ နှင့်တိတ်ဆိတ်ပေမယ့်နူးညံ့နှင့်အပြည့်အဝ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ။ သင်၏အိပ်မက်ကိုဖြေရှင်းရေးသို့မဟုတ်အမှုအမျိုးမျိုးအပြားဝိညာဉ်? အပေါ်”ဗီဒီယိုကွန်ဖ”။ ထွက်ရှာဖို့ဒီအကြောင်းအတွက်ဒိန္း၊ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်အပေါ်။ ဒါဟာအခမဲ့ဖွင့်နှင့်အခြားမည်သည့်ထက်ပို။ အားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရရှိမည်၊သငျသညျပြီးဝင်ရောက်ဖို့အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များ:သင်အတွက်ထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာအမြင်အသုံးပြုသူများ’ဓါတ္ပံု၊မှတ်ချက်များထားခဲ့၊မက်ဆေ့ခ်ျများရေးဖို့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချက်တင်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာ”ဗီဒီယိုမှချိန်းတွေ့”အဖြစ်နှင့်အသစ်အစည်းအဝေးစောင့်ဆိုင်းမည်မဟုတ်။
ခင်ဗျားအတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်။ ၎င်း၏ခြားနားချက်သည်မြောက်မြားစွာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်လူမှုကွန်ယက်များအကြောင်းရှာဖွေချိန်းတွေ့ အတွက်အွန်လိုင်း။ သငျသညျမလိုအပ်ပါဘူးရက်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်၊သင်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအဖြေစောင့်ဆိုင်း။ မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ကြသည်။ သင်ရှိသည်နိုင်စကားပြောသလိုမျိုးအတွက်တိုက်ရိုက်စကားပြောဆို။ ဒါဟာကြွယ်ဝအားဖြင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသင်သာရေး၊ဒါပေမယ့်လည်းအမြင်နှင့်အကြား၏ အားဖြင့်ကင်မရာနဲ့မိုက်ကရို။ စတင်စကားပြော၊သင်ပြုလိုအပ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊အလုပ်မှတ်တမ်းနှင့်စတင်လွှင့်ရုံနှင့်အတူလာမည်ပြောင်နှင့်ချိတ်ဆက်သင်၏ဝက်ဘ်ကမ်။ ရှောင်ရှားရန်ပျင်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိမ့်မည်သင်ဖျော်ဖြေနှင့်အတူဂီတနှင့်ဗီဒီယိုကလစ်ဝယ်လိုအားအပေါ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်။ နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ကျွန်တော်ကိုင်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအတွက်အမှန်တကယ်အချိန်။ သင်သိမှရပြီးပင်ကောင်း၏။ လူတွေ့ဆုံရန်၊ဆက်သွယ်နိုင်၊နှင့်ပင်လက်ထပ်။ ကြိုးစား။ ဒါဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယို၊သင်မြင်တွင်ဧည့်ဂင်နှင့် ။ ဘတ်၊ဂင်နှင့်အဂင်၊၊ နှင့်များစွာသောအခြားမြို့၌ဒိန်းနှင့်ယူကရိန်း။ အသက်ရှင်သောစမ်းချောင်း၊စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီဆိုရင် သင်ရှိပါကတစ်ဦးကမ်၊သင်ကမလိုအပ်ပါဘူးမှတ်ပုံတင်ရန်၊သင်ရုံလိုအပ်တဲ့ကီးဘုတ်၊မောက်၊ဆက်သွယ်လိုတဲ့ဆန္ဒနှင့်အပြုသဘောရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့နွေဦးပေါက်ရာသီအတွက်နှစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း။ ဒါဟာပထမနှစ်တွင်လူတွေ့ဆုံကြမှာပါ။ နှင့်သင်တစ်ဦးဟုပြောဆိုရှိသည်ဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အကြောင်းပြောဆို။ သင်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်မီးေစားသမားများအတွက်အသက်ရှင်သောစမ်းချောင်း။ ငယ်လေးတစ်ကားနှင့်ကုန်တင်ကားများမှာဒီမှာ။ မစာရင္းသူတို့အားလုံးပင်လျှင်မကြိုးစား၊ဒါကြောင့်ပိုကောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ရှု၊မဲ့ပျော်စရာရှိသည်ချင်? ကံမကောင်းစွာ၊အပြည့်အဝခေါ်ဆိုခများ၏အင်္ဂါရပ်နှင့်ကောင်းတစ်ဦးကွန်ပျူတာနှင့်အစာရှောင်အင်တာနက်။ ပထမအ နှင့်အပောက်လႊတ္ရသင့်လျော်မရှိကြပေ။ ဒါပေမယ့်ငါခန့်မှန်းအဲဒီလူတွေနှင့်ကားများမဟုတ်ပျောက်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်ဖို့မနှင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦးအစာရှောင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်၊သင်အလွယ်တကူလုပ္ရန္ဆိုက်အကောင့်ကိုအားလုံးအဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်။ ဤသည်အလွန်လွယ်ကူသောလုပ်။ ဒါပေမယ့်နားလည်ရန်အနည်းငယ်ကောင်း၊မပျင်းနှင့်အဖတ်အကူအညီအပိုင်း။ ဒါပေမယ့်အရင်၊ငါ့လို၊သင်သည်အတူ၊ငါ့ကိုအ၊လွန်းပျင်းရောက်နေတယ်ဖတ် သို့သော်၊သင်ပိုမိုဖြစ်လာအရဲရင့်ခြင်းနှင့်နှေးကွေးစွာနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်အရာအားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အ။ မရှင်းလင်းသောဆက်သွယ်ပါအအိပ္ခအကူအညီနဲ့သူတို့ကိုဆန္ဒရှိသာယာသော၊စိတ်ဝင်စားဖို့စကားပြောဆိုချက်နှင့်အသက်ရှင်သောစမ်းချောင်း။ ငါနီးပါးကိုရေးသားပါ။ အမျိုးသားများအတွက်၊မလုပ်ပါနှင့်။ ငါနားမလည်ကြဘူးဘယ်မှာအစဉ်အလာအမွတ္အသူတို့ရဲ့လိုအပ်သည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှကြွလာ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တစ်ဦးပိတ်ပင်ထားမှု၊ဤအချိန်။ ဒီတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အသက်ရှူကျပ် ၊ကျွန်တော်မေးကြည့်ပါသင်အချိန်ဖြုန်းဖို့။ နှင့်သင်၏ကံကြိုးစားတခြားတစ်နေရာရာ။ သင်တန်း၏၊ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မည်ဟု၏ဂုဏ္သိကၡာ:-)သင့်ရဲ့နားလည်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းရှိပါတယ်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ကြီးမားသောနံပါတ်များ အသုံးပြုသူများအတွက်အသက်ရှင်သူ၏ကမ္ဘာ့အသွင်။ ဤသင်ကူညီလိမ့်မည်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုမည်သူမဆိုချင်တယ်။ သူသို့မဟုတ်သူမရှိပါတယ်အဖြစ်ရပ်စဲရန်ပိုင်ခွင့်စကားဝိုင်းကစကားပြောသည့်အချိန်တွင်မဆို။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊အဆိုပါစနစ်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်နောက်အမည်မသိလူတစ်ဦး။ မဆိုဤလူအတွေထဲကနေလာနိုငျမည်သည့်ထောင့်ကမ္ဘာ၏ဟောပြောသူတို့၏ဘာသာစကား။ အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အဘို့ဤဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့သင်တန်း၏၊သင်လိုအပ်အဂၤလိပ္စကတည်းက၊ဤဘာသာစကား၏တစျခုထည့်သွင်းစဉ်းစားရေးအပါဆုံး။ မကြာခဏအားဖြင့်တိုက်၊ကိုအောက်ပါဘာသာစကားများအထောက်ခံနေကြတယ်:အင်္ဂလိပ်၊စပိန်၊ဂျာမန်တွေတိုးတက်လာရန်သင့်အသိပညာ၏နိုင်ငံခြားဘာသာစကား။ -ရေးဖို့စာသားမက်ဆေ့။ ဤသည်ကိုမကြာခဏဘယ်လိုလူတွေဆက်သွယ်ဖို့။ ဒါပေမဲ့သင့်ရဲ့ ။ နောက်တစ်ခု၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကမ်မိုက်။ ဤအသင်လိုအပ်သမျှအမှန်တကယ်ဆက်သွယ်သောသူလူတို့နှင့်အတူဖြစ်ပျက်အဖြစ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ-သင်ပြီးပြည့်စုံအစုံများအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းအွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်မြန်နှုန်း သင့်ရဲ့ပံ့ပိုးပေးလိုအပ်သောအရာအတွက်ဆက်သွယ်ရေးအရည်အသွေးမြင့်မားအသံဖိုင်နှင့်ဗီဒီယို။ သင်တို့အဘို့အသံခ်၊ငါတို့သည်တစ်ဖန်အစီရင်ခံစာအပြည့်အဝစာရင်း၏”ပါဝင်ပစ္စည်းများ”:လျှင်အားလုံးသောပါပြီ-ကျနော်တို့ကြည့်ဖို့ပျော်ရွှင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ခြင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကား(အင်္ဂလိပ်၊ပြင်သစ်၊ဒိန်းမတ်၊ရုရှ၊အမေရိကန်၊စသည်တို့ကို။)။ သူတို့တစ်ဦးစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ချိန်ညှိနှင့်အားသာချက်များ။ အခါအတင်ဆောင်၊နှိပ်ပါ”စတင်”ကြယ်သီး(သင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်အသံုျပဳႏိုင္ပါအက္ပ္ကိုအတွက်အသင့်ရဲ့ခ််ိန္ညႇ်ိခ်က္)၊နှင့်သင်ပြုသောအမှုဖွင့်။ ဆက်သွယ်၏မျက်နှာကိုထောက်။ အခက်အခဲပေါ်ထွန်း။ ဘယ္လိုလုပ္ရကင္မရာကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး? ခင်စစ်ဆေးနေရှိမရှိပါတယ္သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ။ သင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကမ် ၊သင်လိုအပ်ကိုပိတ်ပြီးပြောင်းလဲမှုကို(ဤအရေးကြီးသော)။
အင်တာနက်ကိုတကယ်တက်ဖွင့်လှစ်မားသောအခွင့်အလမ်းအသုံးပြုသူများအဘို့အ၊နှင့်၏ကြီးထွားလာသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးကူညီနိုင်၊နှင့်သင်၏အမြန်နှုန်းကိုအင်တာနက်သုံးစွဲဖို့သင်ဖို့သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုမရှိဘဲနှောင့်နှေးနှင့်အခြားပြဿနာများ။ သင်ခံစားရလျှင်သင်အပေါ်အထဲကပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ဆက်သွယ်နှင့်အတူစစ်မှန်သောလူသည်၊ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမမိသားစုဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆိပ်ကမ်းရှိသောသူပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အချိန်ကိုယူ၊သင်၏အားသာချက်ယူခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်န်ဆောင်မှုများ။ ယခုရှိပါတယ်တကယ်အများအပြားရှိရာနေရာများသင်ရုံရန်လိုအပ်သွားရန်နှင့်စပ် နိုင်တယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူစတင်ဆက်သွယ်ခြင်းမှာမည်သည့်အချိန်။ သာတူယောက်ျားလေးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဗီဒီယိုချိတ်ဆက်မိန်းကလေးများပြောပြရန်။ နိုင်ငံခြားအလေ့အကျင့်အသုံးပြုပြီအချိန်အကြာ၊သာအနည်းငယ်တစ်ဒါဇင်အလားတူဆိုဒ်များနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မားဝန်ဆောင်မှု။ အခမဲ့ဒိန္းဗီဒီယိုချက်တင်ထံမှအဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနား သူတို့အရည်အသွေးကောင်း၏ကမ္ဘာ့ဖလားအခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်၊ဒါပေမယ့်နေဆဲတစ်ဦးမျှမျှတတကြီးမားပရိသတ်ကိုအဆင်သင့်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း၊အဆင်ပြေ၊ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုများ၏ကြွင်းအကျန်မှာအနိမ့်အဆင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်:ဤကဲ့သို့ဝန်ဆောင်မှုချဲ့ထွင်၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနေ့တိုင်း။ ၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးသားသောအရည်အသွေးများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ဗီဒီယိုချက်တင်ႏကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုသူအဆင်ပြေ။ အခမဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောစတင်သည်နီးပါးချက်ချင်း၊နှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ များအတွက်ချင်ကြပါဘူးတဲ့သူတွေအချိုးတက်ပြီးနောက်ဆက်သွယ်ခြင်းအသစ်တစ်ခုနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိပါတယ်၊အစားထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးပြီးနောက်အချိန်တိုအစအဦးမှဆက်သွယ်ပြောဆို။
လောလောဆယ်၊ပေါင်းကူးနေရာမဟုတ်မျိုးမျိုးလူတစ်ဦးအပေါ်မှာမူတည်ပြီး။ ဒီအလိပ်များဖြစ်ပေါ်ကျွန်တော့်အတွက်၊မင်္ဂလာပါ၊ရှိပါတယ်၊စသည်တို့ကို။ သင်ယူဒိန်းလွယ်တကူ၊ရွှတ်နှင့်အလျင်အမြန်။ ဒီသင်တန်းပါဝင်သည်၊သင်လိုအပ်သမျှကိုပြောပြရန်အတွက်တစ်ပတ်လျှင်သို့မဟုတ်နှစ်ခု။ လွယ်ကူတဲ့အသုံးဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အတူန်းသင်ယူဖို့ခွင့်ပြုသင့်အားဒိန်းမတ်နေရာ သင်ချင်သမျှကို-အိမ်မှာ၊ကားထဲတွင်၊ဒါမှမဟုတ်အနီးအနားမှာ။ ရှိမရှိသင်တစ်ဦးအစပြုသူဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်ပြီးသားပြောဒိန်းမတ်အချို့လမ်းအတွက်၊သင်တအံ့တသြလိမ့်မည်ပုံကိုလျင်မြန်စွာမှာမာစတာဒီဘာသာစကား။ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသော၊နှင့်”စုံလင်သော”ကိုဆိုလိုသည်”အမှား-အခမဲ့အတွက်ရှစ်သည္”။ ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဤအတူ၊နှင့်အမည်ပေးအခွင့်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူမှအခမဲ့လေ့လာမှု၏သင်တန်းတွင်ဒိန်း။ ပဲဖတ်ပြီးအပြီးတိုးချဲ့မှုအတွက်မည်သည့်အားနည်းချက်များသို့မဟုတ်လက်ဗွေသင်ရှာတွေ့။ သင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်”ဆက်သွယ်ရန်”၏ထိပ်မှာခလုတ်ကိုအနူးဘားတန်း။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်များအတွက်အကြောင်းပြချက်သင်ယူဒိ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်များအတွက်အကြောင်းပြချက်သင်ယူတဲ့ဘာသာစကား။ သင်ထောက်ကူအတွက်ဒိန်းမတ်။ အသီးအသီးအပတ်က၊အများအပြားထောက်တာဝန်ခံအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
ဒိန္း-အွန်လိုင်းရုပ်သံ။ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အွန်လိုင်းရုပ်သံ။ ဂြိုဟ်တုအင်တာနက်။ အင်တာနက်ရုပ်သံ။
။- ကက်၏အဓိကရုပ်သံချန်နယ်။ ကျနော်တို့ပူဇော်တစ်ခုကျယ်ပြန့်စာရင်း၏အရေးအပါဆုံးလမ်းကြောင်းနှင့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်။ အကက်များအအွန်လိုင်းချန်နယ်များပါဝင်သည်လူကြိုက်အများဆုံးရုပ်သံနှင့်အင်တာနက်လမ်းကြောင်းများ၏အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစား:ဂီတ၊ရိတ္သတ္၊အားကစား၊သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊သားသမီးရဲ့ရုပ်သံချန်နယ်၊အဖြစ်များစွာသောအခြားလူကြိုက်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသစ္ျဖစ္ပါနှင့်အတူသစ်ကိုချန်နယ်။ ရီဒိန်းမိသားစုအွန်လိုင်းသုံးအင်တာနက်။
လာပေါ်၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာမည်သူမဆိုအတူကနေတဆင့်ကမ်။ စရာမပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းရှိပါတယ်အွန်လိုင်းကလူနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထက်ကအင်တာနက်ကနေတဆင့်။ အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ဒိယိုချိန်းတွေ့အသစ်တစ်ခုနှင့်ပျော်စရာလမ်းချက်တင်နှင့်အတူမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမလိုအပ်။
ပူးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိန်းဗီဒီယိုချိန်းတွေ့။။။။။ ဒိန္းဗီဒီယိုချက်တင်တက်သင်စောင့်ရှောက်မည်နှင့်အတူယနေ့အလုံးနောက်ဆုံးပေါ်။ ပထမ၊ကစားတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊သင်ဆက်သွယ်နိုင်အတွက်အထွေထွေနှင့်ဒုတိယ-အများအပြားရွ္ႏိုင္ငံျခားအသုံးပြုသူများအတွက်သိမ်းယူကြ၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊စာမျက်နှာ”မောင်းထိုး”၊ဆိုလိုသည်မှာရှိပါတယ်ယောဂ၊ဒါခေါ်”ကစားတဲ့”-တစ်တွဲဖက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူများ။ မကြာခဏနှင့်အတူအောင်မြင်မှု:လူနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်များ၊ဝါသနာ၊နှင့်ရူပါရုံ၏အသက်သောနှစ်ဖက်သွသီးအသီးအခြား၊အချိန်းအချက်။ တည်ရှိ သွင်အစည်းအဝေးအကြားယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအဆုံးသတ်နှင့်အတူတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အစည်းအဝေး။ အခါသင်ဆက်သွယ်ခြင်းစတင်ကဤဝန်ဆောင်မှု၊ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင်း:အဆိုပါလူလိမ့်မည်အစည်းအဝေးများမှာနည်းပညာပိုင်းအတတ်၊ယဉ်ကျေးပြီးစမတ်င့္အခြားသူများအတွက်စနစ်(ကွန်ပျူတာမသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိ)။ ဤသည်ကြီးစွာသောနေရာဖြုန်းဖို့အချိန်နှင့်တွေအများကြီးလုပ်၏အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ဒါဟာသတိရဖို့အရေးကြီးကြောင်းလိင်မဟုတ်ပါဘူးအကျင့်အတွက်ဒီဝန်ဆောင်မှု၊ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးလိင်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့:တစ်ခုတည်းသောဆက်သွယ်ရေးအပေါ်အများအပြားဘုံအကြောင်းအရာ။ နှင့်သိသိသာသာ၊ဗီဒီယိုစကားပြောများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်လျော်၊ရိုးသားသူတွေမဟုတ်ကြဘူးပြပွဲညစ်ညမ်းသောမူအနိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်မကြာခဏမြင်စေသာဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများအပေါ်လူမှုကွန်ယက်။ သင်ရှိသည်သောသေချာအောင်အနည်းဆုံးလိုအပ်သောအပွေးအဆိုပါဗီဒီယို:အတော့ပ်၊တက်ဘလက်၊သို့မဟုတ်ဖြုတ်ဆာက္ထားေသာကမ်၊မိုက်ခရို၊နား၊သို့မဟုတ်ပီ။ ခေတ်ဟာ့ဒ်ဝဲလည်းသင့်လျော်သည်၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်သင့်သည်အင်တာနက်နှင့်အတူအနိမ့်ယူႏုိင္ေစ္လံုးဇ(ယနေ့ရှားပါးပေး ကယ်နည်း၊သို့မဟုတ်ပင်စ္လံုးစက္ကန့်)။ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊သင်သည်လည်းမဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပြီးအတွက်ဗီဒီယိုစကားပြောပါ၊ဒါပေမဲ့အဲဒီအထူးဝန္ေဆာင္မႈအတွင်းစီမံကိန်းများအတွက်အရာသင်ပေးဆောင်ရပါမည်။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်ကောင်းသောအမှတ်ပုံတင်ရန်၊ဖြည့်စွက်အတွက်အခြေခံအချက်အလက်များနှင့်အဆင့်အတန်း-စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ဖို့အမည်သူကိုကြည့်ရှုသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်း။ ဒါကြောင့်လည်းတန်ဖိုးရှိအသံုးျပဳျဓါတ္ပံု-အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊အဖြစ်အားလုံးအတွက်လူမှုရေးကွန်ရက်၊ကိုဆွဲဆောင်၏အာရုံစိုက်မှုကိုအများပြည်သူ။ သင်ဓါတ်ပုံများကိုယူပေါ်အစက်အပြောက်နှင့်အတူအညီကမ်။ ပြောနိုင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အနှေးနှေးကွေးကွေးပေမယ့် တိုးတက်ကောင်းအဟောင်းစကားပြော? တဦးကိုလက်တွင်၊ဗီဒီယိုစကားပြောရှိပါတယ်ကွဲပြားတဲ့အားသာချက်:အဆိုပါစကားပြောစွမ်းရည်ကိုမျက်နှာ။ အခြားလက်ပေါ်၊ဝဘ်စကားပြောတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်သင်၏လိမ္မာပါးနပ်နှင့်ဟာသကိုခံစား၊ပြီးတော့တရားသူကြီးအားဖြင့်သင်တို့ကိုသင်မည်သို့ကြည့်ရှု။
အဘယ်ကြောင့်ရှိအိမ်ထောင်ဖြစ်လာဒါကြောင့်လူကြိုက်များအတွက်ဒိန္း? အပျော်တမ်းလိုသူမိသားစုစတင်ရင်ဆိုင်ရဗြူအတားအဆီး၊အထူးသဖြင့်ကြွလာသည့်အခါအကိုလက်ထပ်ဖို့အလုပ္လုပ္ခြ။ ဒီလိုအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်လက်ထပ်မှတ်ပုံတင်သိသိသာသာနှောင့်နှေး။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်လက်ထပ်ဖို့ဂျာမန်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦးဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ၏အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့၊ထိုအခါအမြန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းမှတ်ပုံတင်ရန်တစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်ဒိန်းမတ်။ ဤသည်အများဆုံးအဆင်ပြေသောဥပဒေနှင့်နည်း။ ဒိန္းဖန်တီးဥပဒေများ၊ အရာများအတွက်သင့်လျော်ပါတယ်။ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအတွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်ဒိန္းအနည်းငယ်မျှသာရှိပါတယ်။ ထိုအချိန်များအတွက်အိမ်ထောင်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ တည်းခိုအတွက်ဒီနိုင်ငံကအပေါဆုံးမသည်။ ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်အတွက်ဒိန်းမတ်များသောအားဖြင့်မသုံးသပ်၊ဒါပေမယ့်သာကောက်ချက်ချ။ မကြာခဏကြောင့်အဘယ်သူသည်စုံတွဲများလိုလက်မှတ်ထိုးထားခဲ့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့။ သို့သော်ရှိသမျှတုိက္ဆုိင္မႈရုံး၌ဒိန်းမတ်တော်မူသည်နှင့်အညီ၊စာရွက်စာတမ်းများ၊၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေကိုရက်ပေါင်းအရေအတွက်၏ထပ္ဘဲေ၊တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးငလ်င္ေရက်ပေါင်း။ တစ်နေ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားအမြဲအများဆုံးအမြတ်အစွန်း၊အတိုင်းတိုင်းထောင်ရေးအေဂျင်တောင်းခံနိုင်သည်ဟုဆိုထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေလဲႊေျထက်ပိုပြီးနှင့်အတူသုံးဆယ်ထောင်အုပ်ချုပ်ဖုံးအုပ်နှစ်ဆယ်နှစ်ဒိန်းနယ်မြေ။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြောင်းကိုအများဆုံးအမြတ်အစွန်းရွေးချယ်မှုအပေါ်မူတည်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်အိမ်ထောင်အတွက်အဂင်စေခြင်းငှါများအတွက်အသုံးဝင်သောစုံတွဲနေထိုင်ဝေးကိုဒိန်းမတ်မှ၊ဒါပေမယ့်ရွေးစရာတခုမဟုတ်ပါဘူးလျှင်သင်ကလိုချင်တယ်-တစ်ဦးအမြန်မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ဒိန်းမတ်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်ဖျော်ဖြေဒိန္းတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုအားလုံးနိုင်ငံ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်ဒိန္းလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားများအားလုံးကမ္ဘာ၏နိုင်ငံအဝင်၊ဒိန္းနှင့်ဥရောပနိုင်ငံများ။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်၊ကျနော်တို့အတူသင်တို့ပေးနိုင်ပါသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့သူရှေ့နေသင်ကူညီလိမ့်မည်ရရှိနေအိမ်သို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထွက်ခွာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝင်မိတ်ဖက်အဂတိတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ဦးလျှော့စျေး။ ဖြည့်စွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်ထရိုက်အပေါ်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဒါကြောင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်။ စာချုပ်။ ဒေါင်းလုပ်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့်ဖြည့်စွက်ထွက်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ႏွင့္။ ထားဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့ဒီနေ့ရက်စွဲည့်လက်မှတ်။ ကြေညာဖို့အမှတ်ပုံတင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ။ ရလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်တစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုးကြေညာမှာအမြဲမေးရုံးနှင့်အားဖြင့်သူတို့ကိုပေးပို့။ ကျနော်တို့ကစစ်ဆေးလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများနှင့်သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်အတွင်းတုန့်ပြန်တစျနေ့။ ရှိသမျှကောင်းသွားလျှင်၊သင်တို့သည်လည်းလက်ခံရရှိတစ်ဦးငွေပေးချေမှုပြေ။ မလက်ခံရရှိစစ်ဆေးငွေကိုနေ့တိုင်း။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မေးပေးပို့ဖို့သင်တစ်ဦးငွေပေးချေမှုအတည်ပြုများအတွက်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်တုိက္ဆုိင္မႈရုံးသည်တစ်ခုမှာအချိန်။ ခရီးဟမ်းဘတ်ပျံယာဉ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်များအတွက်မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ဒိန္း အိမ်ခြံမြေအတွက်ဂျာမမင်္ဂလာဆောင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဒိန္းခရီးဟမ်းဘတ်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂျာမနီဒိန်းမတ်လမ်းညွှန်မှာဟမ်းဘတ်၏အစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးဒိန်းလမ်းညွှန်တွက်စီးပွားရေးအတွက်ဂျာမနီဒိန်းမတ်လမ်းညွှန်မှာဟမ်းအဟမ်းဘတ်
ဤသည်၏အစိတ်အပိုင်းကြီးကြီးမားမား။။။။။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့၊ကျနော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုင်း-ဆု”များဆုံးအိုကေ”၊အဘယ်မှာရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်၊တီဗီစီးရီး၊သီချင်း၊ကပြ၊တိုက်ရိုက်လွှင့်၊အွန်လိုင်း၊ ဖျော်ဖြေပွဲနှင့်ဘလော့ဂ်များအနှစ်နှစ်ဆယ်အရွယ်၊မဲသင်အကြိုက်ဆုံးစီမံကိန်းအတွက်အသီးအသီးအမျိုးအစား၊နှင့်သီးသန့်တံဆိပ်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သင့်ပရိုဖိုင်းအဖြစ်၊သင့်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့အဘယ်သူသည်နန်းထိုင်ချိန်အထိဖြိုလမ်းညွှန်အစြဲအမဲလံုးနေ့အထိ ၁၀ နှစ်မြောက်ဆုချီးမြှင့်ခြင်း၏။ တကယ်တော့၊အပေါ်ဒီဇင်ဘာလ ၁၀၊အပိုထောက်ပံ့သောသူတို့အားပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်၊အဆင့်မြင့်၊သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းနှင့်စေလွှတ်မည်။ ငါမှာမဟုတ်ဘူး။ ငွေရှာလိမ့်မည်ဟုအပေါ်သုံးစွဲ အဖြစ်ပျော်စရာ။ ဒါပေမယ့်အရသာ။ သူနှင့်အတူ။ ဤသည်သာအဘ်ချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုသင်ရခွင့်ပြုထားသောအကျွမ်းနှင့်အတူအင်တာနက်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နဲ့ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်အသုံးပြုမည်သည့်ကင်မရာဝက်ဘ်ဆိုက်၊နှင့်ကီးဘုတ်။ သင်နိုင်အောင်စျေးပေါတဲ့ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူဆွေမျိုးသားချင်းများ၊အသိအကျွမ်းနှင့်မိတ်ဆွေများကို၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဖန်တီးတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်း ၊ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဦးကမိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးထံမှမည်သည့်မြို့သို့မဟုတ်ပင်။ နှင့်အခမဲ့စာသားအဘို့ကြီးသောစာသားနှင့်အမည်မသိဆက်သွယ်ရေး။ လက်လှမ်းဖို့ဒီယိုမ်ားႏွင့္ စာသားမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း-ကနေတဆင့်လူမှုရေးကွန်ရက်သို့မဟုတ်။ စတင်စကားပြောကိုအွန်လိုင်းမှသင်ယူခြင်း၊မေတ္တာနှင့်မိတ်ဆွေများဖြစ်။ မှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်အားလုံးချက်တင်အခမဲ့နှင့်အလွန်အစာရှောင်ခြင်းကြောင့်ထက်လျော့နည်းကြာ။ တစ်ဆိုဒ်အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးအသုံးပြုသူများ။ ၁၈
ပူးပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိန်းဗီဒီယိုချိန်းတွေ့။။။။။ ဒါကြောင့်၊သင်သိုထားတက်မှရက်စွဲနှင့်အတူအဖြစ်ပျက်သောအရာခပ်သိမ်း။ အသက်တာ၌၊သငျသညျရှိသည်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန့်သတ်နည်းလမ်းများစွာအတွက်။ ကျနော်တို့လုံလောက်တဲ့အချိန်မရှိဘူးသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မိတ်ဆွေများနှင့်အရ၊တစ်ဦးတည်း၊အနားယူအတွက်ကုမ္ပဏီ၊ဦးကြိုပြုခြင်းစိတ်ဝင်စားဖို့လူများနှင့်ပဲအနားယူအတွက်နွေးထွေးလေထု။ လူတွေကမကြာခဏစိတ်ပူသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာများ၊သို့မဟုတ်သာမန်အသေးအဖွဲအလုပ်များမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်။ နှင့်ယခုတိုင်၊အကြိုက်ဆုံးအချိန်အဖေးဖြစ်ပြီးသားပိတ်၊စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာဘယ်သူကိုနှင့်အတူဖို့နေ့စွဲအပေါ်သွားသည့်အတွက်ရုပ်ရှင်ရုံများအတွက်နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးလုံးဝမရှိသောခွန်အား။ ဒါဟာအများကြီးပိုပြီးသာယာသောအိမ်မှာဖြစ်နှင့်၊တွင်ထိုင်တစ်တောင့်သက်သာကုလားထိုင်များအတွက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာသို့ခုန်ချပြီးအံ့သြဖွယ်ကမ္ဘာ၏အသွင်အာကာသ၊သင်တွေ့လိမ့်မည်သည့်နေရာများကြီးကိုစိတ်ဝင်စားစရာအမှုအရာ။ လူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေးဆိုဒ်များနေ့ ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူအချိန်မကန့်သတ်။ ဒီမှာသင်အမြဲအဘို့အစောင့်ဆိုင်းမျှော်လင့်ဘဲနှင့်ကျပန်းအစည်းအဝေး၊အသစ်အစည်းအဝေးစေနိုငျသောအဆုံးအဖြတ်နှင့်အရေးကြီးပါသည်။ သင်ပါဝင်ရန်အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်လုံးဝအခမဲ့အဘို့နှင့်မည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားများ။ ရုံဖွင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ဖို့သင်၏ဝက်ဘ်ကမ်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ”စတင်”ကြယ်သီး။ အရေးအပါဆုံးနှင့်အလှပအံ့အားသင့်စောင့်ကြိုသောသင်သည်ဤစာအုပ်ထဲတွင်ကန့်အသတ်ဆက်သွယ်ရေးကျော်အချိန်တစ်ရှည်လျားသောကာလ။ ကျင်းကို၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့ဆုံရန် ၂၄ နာရီတစ်နေ့လျှင်ပြီးတော့နေ့တိုင်းပြီးသည်အထိသင်ချင်ဝင်ထွက်သောကြောင့်ချက်တင်ဆိုက်ထဲကိုပွင့်လင်းသည် ၂၄ နာရီတစ်နေ့လျှင်။ အုပ်ချုပ်မထွက်ခွာအလုပ်ခွင်တစ်စက္ကန့်အဘို့နှင့်ဖိနှိပ်မှန်လုပ်ရပ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်စွက်တွက်အဆင်ပြေ။ သွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့် နှင့်အတူအချိန်အကန့်သတ်နဲ့ၾကာင္း၊လူတိုင်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အတိအကျအဘယ်အရာကိုသူတို့အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ကြ။ ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲအချိန်အကန့်သတ်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတခုဖြစ်တယ်ရစတင်ခဲ့:နိုင်ယူ၏ရှုပ်ထွေးသော၊ ၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရှက်ကြောက်နှင့်ဖိနှိပ်မှုအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ကမ္ဘာ့အတွေ့အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူညီသောအကျိုးစီးပွားအတွက်တွေ့ဆုံရန်အသားကစားတဲ့စကားပြောတည်ဆောက်ဖို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အချိန်းအချက်၊ပြပွဲ၏အခွက်၊အဆက်အသွယ်နှင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးအထီးကျန်၏၊ရထောင်၊ပရော၊ရှာတွေ့နဲ့တူ-စိတ်တူကိုယ်တူလူတွေ၊နိုင်ငံခြားဘာသာစကား၊သင်သည်သင်၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းချဲ့ထွင်။ သွယ်၏ပထမဦးဆုံးဆက်သွယ်အကြောင်းသင်ယူရန်၎င်းတို့၏သမိုင်း၊ရစိတ်ဝင်စားနှင့်စေ့စပ်၊ကိုထိန်းသိမ်းရန်၊နှင့်ပြအကျိုးစီးပွားအတွက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။ မကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန့်သတ်ဖို့သင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒနှင့်အပေါ်အရှုံးမပေးဘယ်တော့မှ။
ရန်သစ်တစ်ခုသွားရာလမ်းမှုမရှိရင်အွန်လိုင်းငွေရှာ။ ဤအမျိုးအစားသုံးဝင်ငွေရရှိနိုင်ဖို့လူတိုင်းချွင်းချက်မပါဘဲ။ အဘလော့ဂါများနှင့်ပိတျဆို့မှု၊ဤသည်အမှန်တကယ်လက်ဆောင်ကောင်းကင်ကနေနှစ်ဦးစလုံးအရင်ကဆိုရင်များအတွက်နှင့်ကျွမ်းကျင်သူများက။ ဖယ်ရှားရန်ကန့်သတ်၊ဝင်ငွေနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကို-ပဲခုပဲဝင္ေရာက္လိုက္ပါ။ မလိုအပ်တဲ့င့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား။
စာပေစိတ်အပိုင်း:ကဗျာ၊ဟာသ၊စာပိုဒ်တိုများ၊ပုံပြင်များ၊သမိုင်း။ အားလုံးမျက်နှာသာအတွက်။ ရကုန်၊အချို့သောအရာကြွင်းလေ။ တောင်တက်အတွက်ရှာဖွေရေး၏အဖော်? သင်ဖြုန်းချင်တဲ့သင့်ရဲ့အခမဲ့အချိန်အသုံးပြုနေသလား။ ရှာဖွေနေများအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်? ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်ရှိသည်မှာရောက်ရှိနေတဲ့နေရာအ အခြေအနေကိုစောင့်ဆိုင်းသင်တို့အဘို့အစုပေါင်းစိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၏နေထိုင်သူအသုံးပြုသူများကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြော။ င္ငံတကာချက်တင်စကားပြောဆိုဖို့အဘယ်မှာကလူနှင့်တွေ့ဆုံကိုယ်စားလှယ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကမ္ဘာအဝှမ်းကွဲပြားခြားနားသောမြို့။ ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပူဇော်ဖို့သင်တူညီသောအရာအဖြစ်လူငယ်နှင့်ပျမ်းမျှလူသုံးဆယ်ကျော်။ အသီးအသီးဧည့်တွေ့လိမ့်မည်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းအဖော်များအတွက်အသက်ဝိညာဉ်၊အဘယ်သူကိုနှင့်အတူထိုသို့သဘောကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်း၏နေဖို့။ အကြောင်းမစဉ်းစားကြဘူးပေါ့သို့မဟုတ်မပေးတဲ့စိတ်ကူးညိတ်နှင့်ပေါ်ရွှေ့။ ဆက်သွယ်ရေးအတွက်၊လှုပ်ရှားတက်ကြွ၊မျှဝေစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အကြောင်းစကားပြောဆို။ ဟုတ်ကဲ့၊သင်ရောက်ရှိလာပါပြီ၊ကျနော်တို့တွေ့ကြပြီအတိအကျကိုချက်တင်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အမြင့်လေးစားမှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအင်တာနက်ကွန်ယက်ကို။ စကားပြောဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေထဲက၊ကျက်၊သောနည်းလမ်းလှည့်ဖြား၏အာရုံအတွက်၊တဦးတည်းစကားလုံး-အမှား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခဲ့သူများကဖန်တီးအပေါ်အကူအတိုဘာလနှစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၊နှင့်ဤနှစ်သည်အရှိန်အဟုန်ရရှိမှုများအတွက်အသစ်အစည်းအဝေးတွေ၊ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အညီ၊သင်တန်း၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ကျနော်တို့ဖွင့်ဖို့၊ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်ကန့်သတ်။ အရေးအပါဆုံးအရာလူတိုင်းအစားမ်ားသာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာ။ အဝေးမှဆက်သွယ်-အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုဆက်စပ်သည်။ အီးမေးလ်၊မိုဘိုင်းဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ဗီဒီယိုချက်တင်၊နဲ့ချက်တင်အခန်းပေါင်း။ ထိုအရုံအနည်းငယ်နည်းလမ်းများကိုအကြားဆက်သွယ်တဲ့အခါလူသူတို့ခွဲကျော်ရှည်လျားအကွာအဝေး။ ယခုမူကားများအတွက် ဤနည်းလမ်း၏ဆက်သွယ်ရေးများမှာအစားထိုး၊မရှိပေမယ့်အသံုးျပဳရန္အသက်ရှင်သောချက်တင်။ ဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတော်တို့ကို? လူတိုင်းတွင်အမှန်ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။ ဆိုရင်ကျနော်တို့အကြောင်းစကားပြောနေကြသည်အပေါ်ချိန်းတွေ့ခြင်း၊ထို့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗီဒီယိုချက်တင်ယူကြပြီထင်ရှားတဲ့နေရာဒီနေရာနဲ့ကစားတစ်ဦးမျှမျှတတကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ ပါကထောင်ရေးအေဂျင်ပူဇော်သူတို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ချိန်းတွေ့နှင့်အသံဖမ်းစာပေးစာယူပြီးတော့၊ဒီအမှန်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းအဆိုပါအချက်ကိုအဆိုပါစုံတွဲကိုအသုံးပြုကြရလိမ့်မည်ဗီဒီယိုချက်တင်။ ဒီဘက်ပါ၊လူနိုင်ပါလိမ့်မည်ထဲကရှာတွေ့သောကြောင့်၊ဒါဟာအစားထိုးအရေအတွက်များစကားပြောဆိုချက်။ အီးမေးလ်အစစ်အဖြစ်ပိုပြီးသိကောင်းစရာများ။ နှင့်ဆက်သွယ်ရေးတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ဗီဒီယို၏ပုံစံအတွက်စိတ်ခံစားမှု။ ကိစ္စအများစုအတွက်၊ရှိသည်မဟုတ်လုံလောက်တဲ့အချက်အလက်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ရှိပါတယ်။ အဖြစ်များအတွက်လာမည့်အစည်းအဝေး၊အကြှနျုပျတို့သညျရှိသည်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်အလေ့အကျင့်တစ်ခုလိုမျိုးချက်တင်ကစားတဲ့။ အောင်အားဖြင့်ကျပန်းရွေးချယ်မှု၊အသီးအသီးအသုံးပြုသူအတွက်စကားပြောလာတစ်ဦးချင်း ။ ဤကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းကိုဖြည့်ဆည်းပြည့်စုံသူစိမ်းများ၏ရှေ့မှောက်၌။ ထို့အပြင်၊နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်လာ၊ဒါကြောင့်အပိုသိရဖို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြား။ ယနေ့အခါ၊အဓိပ္ပါယ်များ၏မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး-အင်တာနက်ကိုလူတိုင်းရရှိနိုင်၊ကျွမ်းနှင့်အတူ၊ဒါပမေဲ့အံ့သွလုံလောက်တဲ့၊ခဲ့သည်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာ။ ကျော်လွှားဒီအတားအဆီးကိုကူညီနိုငျလူမှုကွန်ယက်။ ပေမယ့်သင်သာရနိုင်သတင်းအချက်ကလူအများစုဟာသူတို့အမည်မသိဆက်လက်ရှိနေရန်။ တစ်ဦးချင်းစီလူမှုရေးကွန်ရက်များထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ရေး။။။။။ သင်တန်း၏၊ဒီအကောင်းတစ်စိတ်ကူးက၊အရာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှအားသာချက်များ၏လူမှုကွန်ယက်နှင့်အားလုံးအမျိုးအစားများဝေးလံခေါင်။ ဤအတောအတွင်း၊နှင့်အတူဆိုဒ်များစုစည်းဖို့စွမ်းရည်ကိုဒိန်းချက်တင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်လူမှုကွန်ရက်ကစားသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနှင့်လူေတြကိုအထောက်အကူကလပ်ရှာတွေ့၊အတန်းဖော်များ၊အသိအကျွမ်း၊တခါတရံဆွေမျိုးသားချင်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်၊သင်လုပ်နိုင်သည်၊သီချင်းနားထောင်သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၏ကြီးမားသောအရေ။ နှင့် ဤထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆွဲဆောင်အသစ်အသုံးပြုသူများ။ ဘယ်မှာဆိုဒ်များသင်ဗီဒီယိုချတ်နှင့်အတူသူ့ကိုမမှဆင်းရဲခံရကြပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုသိမ်းပိုက်နယ်ပယ်များရွေးချယ်မှုအတွက်၊ဆိုလိုသည်ဆက်သွယ်ရေး၏။
ခေတ်သစ်၊ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်လူသစ်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ဟောပြောဖို့သူတို့ကိုအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းအရာ။ ဖော်ထုတ်အ အကူအညီဖြင့်ရိုးရှင်းတဲ့အကူအညီ။ အသံုးျပဳသူမ်ားသာအကျပန်းစကားပြောနှင့်အဘို့အမြော်လင့်လျက်နှင့်ဆက်စပ်အပြိုင်ဘက်။ အဓိကအားသာချက်၏အသွင်ဝန်ဆောင်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့လူတွေမပါဘဲ။ ဒါဟာကိုအသုံးပြုသည်ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်မရှိဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကို။ သင်မှတ်ပုံတင်နိုင်မှာမည်သည့်အချိန်။ သူ ဒါဟာကျပန်းဆက်သွယ်ဖို့ဗီဒီယိုစကားပြောနဲ့အခြားအရေးကြီးအချက်များ:အခမဲ့အကြုံအွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်များကိုသင်ရှာခွင့်ပြုငယ္ခ်င္း။ တကယ်တော့၊ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုများကိုအလွန်လူကြိုက်များနှင့်အတူအသုံးပြုသူအများအပြားပြည်ပ။ ဒါပေမယ့်မနည်းစိတ်ဝင်စားစရာအစကားလက်ဆုံနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာက္ဖိုနိုင်သူအကြောင်းပြောဆိုမိမိတို့အကိလေသာနှင့်၎င်းတို့၏ဖန်တီးမှု။ အဲဒါကိုကူညီပေးပါမည်ဒိန်း ဆောင်ရွက်ရန်၊တစ်စိတ်အေးလက်အေးဗီဒီယိုစကားပြောသင်ယူဖင်လန်နိုင်ငံသားများ၏မိမိတို့နိုင်ငံ:ဤဝန်ဆောင်မှုအသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်များအတွက်ခရီးသွားလုပ်ချင်သူတစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်အနည်းငယ်-လူသိများခရီးမိမိတို့ဇာတိမြို့။ စကားစတင်ရန်အခါ၊အသုံးပြုသူမှဆက်သွယ်ရပါတဲ့ကင္မရာစက်ကိရိယာအပေါ်(အတွက်ခေတ်မီတာႏွင့္လက္ေတာ့မ်ား၊အလုံအလောက်ရှိသည်ဖို့တစ်ကမ်သို့တည်ဆောက်ကင်မရာကို)တစ်မိုက်။ အတူအခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်မရှိဘဲကျပန်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊သင်သုံးနိုင်သည်။ တစ်ချိန်ကတည်ထောင်ခဲ့သည်ပြီးပြီကွန်နက်ရှင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်၊သင်စတင်နိုင်ပါသည်၊တစ်ဦးစကားလက်ဆုံ။ အထူးလိုအပ်ချက်အတွက်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေသောအသုံးပြုမှုများ၏ရရှိမှု၏မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်။ အင်တာနက်ရဲ့။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊အဆိုပါဆက်သွယ်မည်အရမ်းရှည်လွန်းယူ၊နှင့်ဗီဒီယိုအရည်အသွေးမည်မဟုတ်ပါအဖြစ်။ နေစဉ်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူကျပန်း မပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန်သာပါးဆက်သွယ်ပြောဆိုပေမယ့်လည်းဖန်တီးရန်၊စာသားမက်ဆေ့။ ဤတိုးချဲ့မှုအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူနိုင်ငံခြား။ အပြိုင်အတွက်၊အသုံးပြုသူကိုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အွန်လိုင်းဘာသာပြန်ပြီးဝင်တစ်စိတ်ကြိုက်စာသားသို့စကားပြော။ မရှိကန့်သတ်အပေါ်အသုံးပြုကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြော။ နှင့်အကျော်ကြားထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့ဆက်သွယ်ရေး၊တွေ့မြင်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်နှင့်ကိုင်တစ်ဦးမှသိကောင်းစရာများနှင့်စိတ်ဝင်တစ်ဦးတည်းသာစိတ်ဝင်စားဖို့စကားပြောဆိုသာတူလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး၊အိမ်ရှင်မများ၊ကျောင်းသားများနှင့်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကျပန်းဗီဒီယိုချက်တင်တွင်ပါဝင်အွန်လိုင်းစျေးနှုန်း၊ချင်သူလူများအတွက်ချဲ့ဖို့သူတို့ရဲ့ကုပ်နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အသက်အရွယ်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးကစားတဲ့အရေးမပါဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်အများ၊အစိုင်အခဲအဟောင်းမျိုးဆက်နှင့်ပင်စင်စားကိုသုံးနိုင်သည်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်မည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တာဝန်ခံအခမဲ့။ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုကူညီလိမ့်မယ်သင်ပျော်စရာရှိသည်ရ၊ကျွမ်းနှင့်အတူအများအပြားအမည်မသိနိုင်ငံ၊သို့မဟုတ်နားထောင်ဖို့နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအပါအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများ၏နေအိမ်။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်ချိတ်ဆက်လိုအပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်စတင်ဗီဒီယိုချက်တင်။
အစည်းအဝေးနှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအသက် ၃၉ နှစ်၊ဝန်ခံသည်အခမဲ့ပါဘဲ။ ၁၈။ အွန်လိုင်း
တစ်ဦးချိန်းတွေ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်မိန်းကလေးငယ်များအောက်ယ့်ကိုးနှစ်အရွယ်၊မြန်စတင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို-မှတဆင့်လူမှုကွန်ယက်။ လွယ်ကူသောရှာဖွေရေးအတွက်မိန်းကလေးများအဘို့အလွယ်ကူသို့မဟုတ်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊တစ်မိသားစုမစတင်နှင့်လက်ထပ်။ သင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အတူမိန်းကလေးများအောက်ယ့်ကိုးနှစ်အရွယ်၊မြန်စတင်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို-မှတဆင့်လူမှုကွန်ယက်။ လွယ်ကူသောရှာဖွေရေးအတွက်မိန်းကလေးများအဘို့အလွယ်ကူသို့မဟုတ်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊တစ်မိသားစုမစတင်နှင့်လက်ထပ်။ လူကိုကိုက်ေ အိုင်၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေလား။ တွေ့ရင်အစစ်အမှန်နဲ့ချစ်ကြည်? ဘာအဆင့်လိုအပ်ပါသလားအယူရှာတွေ့ဖို့တကယ့်သူငယ်ချင်း? ထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုပြည်သူ့စတင်မေးကလေးဘဝကတည်းက၊နှင့်ဖြစ်ကောင်းရှိသမျှအမျိုးသမီးလိုလားဆွဲဆောင်ဖို့လူငယ်တစ်ဦးသောသူသည်၊ဒါပေမယ့်လူတိုင်းမလုပ်ပုံကိုသိ။ ပြင်ဆင်တဲ့မေတ္တာကိုဆေး? သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရရန်ပြိုင်ဘက်:ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်မှု? နည်း။ ဒါဟာရှာရန်အလွန်ခက်ခဲသည်ယောက်ျား၏အိပ်မက်များ၏နှင့်၊တစ်ဦးဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်သူနှင့်အတူ၊ဒါပေမယ့်အချို့အမျိုးသမီးဖြစ်နိုင်ကြောင့်၊သူတို့အသက်ရှင်သောနှစ်ပေါင်းများစွာအပေါ်အပြန်အလှန်မေတ္တာနှင့်နားလည်မှု။ လျှင်သင်မှစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့လူကိုခရီးဦးကြိုပြု၊သင်ဘယ်လောက်နားလည်သင့်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ရှိပါတယ်၊အများအပြားတစ်ခုတည်းကောင်လေးနှင့်အမျိုးသားများသည်သူတွေ့ကြုံနေလျင်မြန်သောအရှိန်အဟုန်၏အသက်၊အလုပ်၊နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်နီးပါးမျှမအချိန်အတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ။ မဟုတ်အနည်းဆုံးအတွက်ရွေးချယ်မှု၏ချိန်းတွေ့ရွေးယူပြီးကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဖြစ်ခံစားမှု၏ဖိနှိပ်မှု။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုအဘို့အရှာဖွေဒုတိယထက်ဝက်အဘို့ယောက်ျားလေးများနှင့်အမည်အသွင်ချိန်းတွေ့၊ဆိုလိုသည်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု တစ္အိမ္တည္း။ အဘယ်ကြောင့်မအလူတွေ့တဲ့မိန်းကလေး? များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်၊ဥပမာအားဖြင့်:အရှက်၊သူယောက်ျားလေးများလည်းရှက်ဖို့ကြည့်၏ညွှန်ကြားချက်တွင်မိန်းကလေးတစ်ဦး၊စိတ်ပျက်၊အဘယ်သူသည်ပြီးသားအတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်လုံးဝစိတ်ပျက်နှင့်အတူအမျိုးသမီး။ တှကျဒါဟာအဆန်းမဟုတ်ပါသဘောထားကွဲလွဲမှုများအပေါ်လာသည့်အခါလူငယ်လူပျက်လက်ပျက်ဖြစ်လာပြီးနောက်အစည်းအဝေးကျောင်းတွင်၊လမ်းပေါ်မှာ၊သို့မဟုတ်အတွက်၊ကိုယ့်အဖြစ်သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်သို့မဟုတ်အတွင်းစိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရောက်မလာသေးပါဘူး။ ကျနော်တို့ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊အခမဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ကြီးစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်ချိန်းတွေ့။ ဖြည့်စွက်ကာ၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အရေအတွက်ရှိပါတယ်အပိုဆောင်းအားသာချက်။ မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးချန်မိမိတို့အဓါတ်ပုံများနှင့်ပရိုဖိုင်းအပေါ်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကမိန်းကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတွေအများကြီးသင်ယူ၊အဓိကဘာစိတ္ဝင္စားမႈမ်ား။။။။ အစီအချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်စိတ်ဝင်စားကြောင်းအချက်တွေမရှိခဲ့စျေးကစားလိုသူများအဖြားနဲ့စိတ်ပျက်။ ဘယ်လောက်ကောင်းသည်မှာတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်? စာရင်းဇယားပြပွဲကြောင်းလူများရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ထပ်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သဟဇာတ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှ၊ရှေ့တော်၌၊ အမေးရန်ကဘယ်လိုဘော်စိတ်ဝိညာဉ်၊နေ့စွဲအပေါ်လူငယ်များ၏စိတ်အားထက်သန်နေကြသည်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှု။ စာပေးစာဖွင့်လှစ်သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့အရည်အသွေး။ ဤအချိန်ကာလအတွင်း၊လူငယ္မ်ားေလ့လာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အဘို့အသင့်လျော်အသီးအသီးအခြားမ။ မိမိအစာကနေအဖာ၊အခမဲ့နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး။ သူငယ်ချင်းများပါစေ။ တွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၊ဆယ်ကျော်သက်သွားဖို့လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း။ အခုသူတို့ပျောက်ကြသည်မဟုတ်အကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီး၊ဒါပေမယ့်အားလုံးအထက်၊ဆက်သွယ်ရေးနည်း၊အသစ်အသက်ကြာကံကြမ္မာသို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက်။ သွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်များအတွက်အခမဲ့နှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ၊သငျသညျနိုင်လိမ့်မည်တွေ့ဆုံရန်မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များနှင့်အမြင်များအပေါ်ဘဝအသက်တာ၊ဤသို့ဝယ်မိတ်ဆွေတစ်ဦး၊နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အနာဂတ်အတွက်နှင့်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အသွင်ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုကိုသာပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရှာဖွေ၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်၊အကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်ထွက်ပေါက်ဘယ်မှာသင်ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်နှင့်မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများပိုမိုနီးကပ်စွာ။ သို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုတွေ့နိုင်တယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်နှင့်မည်သူပေးထောက်ခံမှု၊အကြံဉာဏ်၊ ဟုတ္ဖူး။ ရှိပါကသင်သည်မတွေ့သေး၏ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်အသက်တာ၌တစ်ဦးအဖြစ်မိန်းကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ကျွန်တော်တို့ကိုလာ။ ကျနော်တို့ရှိသည်ကိုအများကြီးအခမဲ့အင်္ဂါရပ်များ၊နှင့်ကျနော်တို့လိုအပ်ပါဘူးဖို့အချိန်မှတ်ပုံတင်-သင်တို့ပြုနိုင်သည်ကိုအလျင်အမြန်မှတဆင့်လူမှုရေးကွန်ရက်။ ရှာသင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်။
ငါ၏ဝမ်းမြောက်မှကြိုဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီချိန်းတွေ့ဆိုက်မိန်းကလေးစကားပြောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့၊အားဆက်ကပ်အပ်နှံချိန်းတွေ့၊အရာတို့တွင်အအလွန်ရေပန်းစားအင်တာနက်အသုံးပြုသူများ။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ချိန်းတွေ့မိန်းကလေးမပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းကူညီပေးခဲ့လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှာတွေ့ဖို့အသီးအသီးအခြားနှင့်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဦးကြိုပြုခြင်းငှါမိမိတို့မေတ္တာကို၊ထို့နောက်သင်သည်ကျိန်းသေဂရုစိုက်စရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီချိန်းတွေ့ဆိုက်ဗီဒီယိုစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များမပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်အခမဲ့အဘို့အမှတ်ပုံတင်နှင့်ဖြည့်စွက်တဲ့ပုံစံကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်။ ထိုအခါသင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူမည်သည့်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အသုံးပြုသူအတူ၊သင်လိုလူသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း မှတ်ပုံတင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲဗီဒီယိုချက်တင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အတူမိန်းကလေးများ၊သင်ပြလည္းေပြသင့်ရဲ့စကားမှန်သဘာဝတရား။ မကြာခဏလူအရှက်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဒီအမှန်တကယ်အသက်တာ၌၊နှင့်အနည်းငယ်သာအလုပ်နှင့်အတူ။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုက်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များ၊ဤအမှုအရာနှောင့်ရှက်မည်မဟုတ်၊သင်လိုချင်တာတွေရလိမ့်မယ်။ အစဉ်အမြဲသုံးစွဲရန်ရှိသမျှအခွင့်အဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုက်၊ဘယ်မှာသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲမိန်းကလေးမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊အလှည့်အတွက်၊သင်အခွင့်အလမ်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတိရစာန်အခုအချိန်မှာ။ အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်ကြာတစ်ခုသာမိနစ်၊နှင့်သင်မည်မှတဆင့်သွားကြဖို့ရှိသည်မဟုတ်မည်သည့်ဒုက္ခနှင့်အသုံးပြုမှုနှင့်အထူးကျွမ်းကျင်မှု။ ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူစကားပြောမပါဘဲအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုချက်တင် ဗီဒီယိုစကားပြောသည်။ ပဲဖြည့်စွက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အဆိုပါဗီဒီယိုချက်တင်မေတ္တာရှင်ကြောင့်ဆံ့စေခြင်းငှါအချက်အလက်တွေအကြောင်း။ သင္၏ဓါတ္ပံု၊ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအပေါ်”ဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့”ဆိုက်၊သငျသညျအာမခံရဖို့။ စကားပြောနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်နှင့်အကြည့်များအတွက်ဘုံအကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်။ နှင့်သင်ကျိန်းသေတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေသင်တွေ့ဆုံရန်ချင်။ သင်ခံစားရလျှင်သူတို့ကိုအကြားတစ်ဦးမီးပွားများ၊သင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်လက်ဆက်သွယ်သူတို့နှင့်အတူစစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ ဖိတ်ခေါ်သူတို့အတူတူအချိန်ဖြုန်းဖို့တစ်နေရာရာမှာအသက်သာပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဗီဒီယိုစကားပြောချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်၊ခံစားကောင်းမွန်သောရာသီဥတုနှင့်သဘာဝ၊ညစာအတွက်ဘားသို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်၊သို့မဟုတ်သွားသို့မဟုတ်ပြဇာတ်ရုံရုပ်ရှင်ရုံ။ ဒါဟာအားလုံးမူတည်၏အထွေထွေဦးစားပေးပြီးသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း။ မဆိုအမှု၌၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အပေါ်တစ်ဦးကဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲ။ မှတ်ပုံတင်အခုဆိုရင်အခမဲ့များအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် စတင်ရှာဖွေနေသင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်။ ထို့နောက်သင်သာနောင်တအကြောင်းသင်ပေးခံကြထံမှမည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်မျှသူတို့ကိုဝေး။ သင့်ရဲ့ကံကောင်းပြီးသားသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေအပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ယူအစပြုပြီးသင့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုရွေးပါ၊နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မထားတဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်မုချသင်ကူညီလိမ့်မည်။
အများမှာများစွာသောနည်းလမ်းများအတွက်အတူတူလူဖြစ်နေကြတယ်၊ဒါပေမယ့်လည်းများစွာသောနည်းလမ်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကြောင်းကိုပြောနှင့်ဒိန်းစိတ်ဒီနေရာမှာအလုပ်ကြမ်း၏ဇာတ်ဝတ်စုံ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ဝေးလံသောဆွေမျိုးသားချင်းများ၏အ ၊တော်ဝင်ပြဇာတ်ရုံအတွက်လူတစ်ဦး။ မှာ မှာအဖွင့်နဲ့ရဲ့အဆုံးမှာဇာတ်ရာသီမှာကြည့်ရှုလျှင်၊အရံ၏နန်းတော်အများ၏နေ့ရက်တွင်မိမိမွေးဖွားခြင်းတို့တွင်ပုံအ ၊ပုံကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမြတ်မ်ိဳးမွ၊ဂီတပညာရှင်၊ကိုမျက်စိနှစ်သက်တဲ့ ။ ခေါင်းစဉ်အပေါ်မြို့၏အိမ္ခန္းတစ္ခါထိထားတဲ့အခါသို့သွားဖို့မီးမောင်းထိုးတစ်ခုခုဆူညံမှာနေအိမ်၊သူတို့၏အသနားခံစာအပေါ်အကြောင်းကြားစာဘုတ်မှာဝင်:ဒါဟာကပြောပါတယ်များအတွက်စိတ်အနှော၊ကျနော်တို့တစ်ရွှင်လန်းပွဲနေ့၊ဒါပေမယ့်လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်ရှိရာသူတို့ခဲ့ကြ။ ဖြည့်စွက်ကာ၊မိဘများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအညာထားခဲ့ဖို့သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့သားသမီးကိုစဉ်အတွင်းအားလပ်ရက်။ ဒီအဘယ်ကြောင့်အများအပြား နှင့်ပျင်းရိလူတို့ကို”ချစ်”ဤမျှလောက်တိရိစ္ဆာန်များ။ ရချင်တယ်ဆိုရင်ကြောင်၊သင်ရမည်အကြောင်းကြားမျိုးဆက်များအသေးစိတ်အတွက်သူတို့ကိုအာမခံသောတိရစ္ဆာန်မဟုတ်လိမ့်မည်နေဖို့အိမ်မှာတယောက်တည်းအချိန်အကြာကြီးပြန်ခေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အဆိပ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာ၊ဒါပေမယ့်အကို၊အခြေချ၊ဆုံးဖြတ်ထွက်အခြောက်မှအဖြူသစ်တော။ နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်၏သိသာထင်ရှားသောအ ၊တန်ဖိုးရှိကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊ပင်ကလေးများနှင့်အတူ။ ဒါဟာ၏အကြောင်းသူတို့မပင်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်အတွက် ကာလအခါ၊သူတို့ကွာရှင်းသူတို့မျှဝေသံနှင့်အခြားအသေးငယ်တဲ့အမှုအရာ။ နှင့်ရှိပါတယ်သည့်အခါမိသားစုပဋိပက္ခများ၊ထိုမြေးကင်းနိုင်သာမှားယွင်းသူတို့၏ဇနီးအနည်းငယ်၊ ဒါပေမယ့်တိုက်ပွဲလည်းဆွဲဆောင်။ ဤအရပ်မှသင်တို့ကိုယူမှတစ်ကူးတို့သင်္ဘောနာ္ေ(လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ညဉ့်အချိန်တွင်၊မွန်းလွဲပိုင်း၌အော်စလိုမှ၊နံနက်ယံ၌အဂင်)။ ခရီးသွားလာ။ အရပ်မှာအပျော်စီးလျော့နည်းကုန်ကျ။ ၏အနှစ်သာဥပေဒခဲ့တဲ့သူဆိုလူတစ်ဦးနှင့်ချက်ချင်းလိုအထက်မြင့်တက်လာရန်အခြားအဖွဲ့ဝင်များ၏သူတို့ရဲ့လူမှုရေးအုပ်စု။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည်သဘာဝအလျောက်ငါတို့အဘို့အရင္ထဲကကျွန်ုပ်တို့ကလေးများ၏အောင်မြင်မှုများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်၊အရည်အချင်း၊သို့မဟုတ်ပြောဆိုရာတွင်အကြောင်းဇိမ်ခံကားတဲ့ဇနီးရဲ့အစ်ကိုပဲ၊သို့မဟုတ်အကြောင်းအလှအပအလှပြင်ဆိုင်ကတည်ဆောက်သည့်ဝန်ထမ်း။ ကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်ဖို့ဘာမှမထူးခြားနိုင်ကြောင်းဘာမှမထားပြီးအပြင်မှငါတို့၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်။ ဒါဟာမဖြစ်နိုင်ေရိတ္ဒိန္း။ ခွေးနိုင်စေဖို့ချိန်းတွေ့သင်မည်သည့်အချိန်တွင်နှင့်မည်သည့်အဆင်ပြေတည်နေရာမြေကြီးပေါ်မှာရဲ့မျက်နှာပြင်။ ရိတ္ဒိန္းအကျဘယ်မှာသိတော်မူလိမ့်မည်၊သုံးစွဲတဆယ်နှစ်အားလပ်ရက်အပေါ်၊အဘယ်သို့ပြုတော်မူမည်အတွက်အနှစ်နှစ်ဆယ်၊နှင့်အဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်မည်သူ့ကိုမှအဆုံးမှာသူ၏အသက်တာ၏။ ဒါကြောင့်အရာအားလုံးကြိုတင်ဆုံးဖြတ်သောကြောင့်၊လူခဲ့သည်။ အရာအားလုံးအကြောင်းကိုလူတွေကျန်းမာသန်စွမ်းအပြုအထူးသဖြင့်ပေါ။ အသီးကိုသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဆေးဝါးများ၊အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးကစားသည်။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊အလေ့အထနှင့်လူနေမှုစတိုင်၊အရာဆုံးဖြတ်ရန်အ နဲ့စတိုင်အဝတ်ကိုဝတ်၏။ အသက်တာ၌ဒိန်းမတ်၊အားဖြင့်စီရင်တော်မူ ၊အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်တရားမျှတတဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှု။ အိမ်နီးချင်းလျှင်ဝယ်စျေးကြီးတဲ့ကားတစ်စီးသို့မဟုတ်ပေါ်သွားနေတဲ့ခရီးနဲ့သူ့မိသားစု၊ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဒုတိယအိမ်နီးချင်းလိမ့်မည်နာနှင့်ပင်ကြည့်ဖို့ပိုပြီးချွတ်ပြသ။ ကိုဆာမယ္လူမ်ဳိးမတူသိပ္လည္းနှင့်ချေးသူတို့နှင့်အတွက်အခွင့်အလမ်း။ ဤသည်အထင်အရှားအတွက်၏အရည်အသွေးအဝတ်အထည်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း-တစ်ဦးကျိုးနွံသည်။ သင်မည်သို့အမျိုးသမီးဝတ်စုံအတွက်ဒိန္း? ဘာအထူးအကြောင်းအမျိုးမျိုးအပြားစတိုင်အများအပြားပရိသတ်တွေအပြင်နိုင်ငံ၏ဆောက်သွားတတ်ကြသည်? ပျမ်းမျှမြို့နှစ်သက်ရိုးရှင်းပြီး၊သက်သာခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား။ ဂင်နှင့်အခြားအဓိကမြို့ကြီးများတိုင်းပြည်အတွက်ကင်းမဲ့ဖက်ရှင်၊အထူးသဖြင့်ညနေပိုင်း၊ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်စုလိုက်အပြုံလိုက်စျေးကွက်အမျိုးအစားများ။ ဂုဏ်ယူစွာလျှောက်ထားကြဘူး။ သောပထမဦးဆုံးအရာသင့်ရဲ့မျက်စိငယ်သည် မျက်စိ-အဆင်ပြေအင်္ကျီ၊အင်္ကျီ၊ဘောင်းဘီ။ သူတို့မရစ်ပတ်ပုံ၊ဒါပေမယ့်ချုပ်၌တစ်ဖြောင့်မျဉ်းနဲ့ပြသကနေတင်ပါးသို့မဟုတ်ဒူး။ များစွာသောအင်္ကျီမော်ဒယ်မဟောင်း၊အနိမ့်ဖြတ်။ အဝတ်နှင့်ဆင်မြန်း၊စည်းကမ်းအဖြစ်၊အဖုံးဒူးသို့မဟုတ်ရောက်ရှိဖို့အဆစ်။ -ဒိန်းမိန်းကလေးများသည်အလွန်ရေပန်းစား။ ေဘာင္းဘီသောလေးလံလွန်းမှခပ်ည္၊အဟောင်းယာဉ်ဆွဲထား၊တင်ပါးနဲ့တင်ပါးမှပြန်လာပါ၊ဒိန္းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့၊သူတို့အံ့သြသွားနှင့်အတူအကြမ်းတမ်းသောအသားအဝတ်ကိုဝတ်၏။ အချို့သောခရီးသြားမ်ားဟာသမကောင်းတဲ့အမှုအရာဖက်ရှင်အတွက်။ သူတို့တွေကအနီးကပ်မှအမှန်တရားကြောင့်၊အရူပါဝမော်ဒယ်အလျင်အမြန်ပေါ်လာအတွက်အထူးပြု။ အမ်ိဳးသမီးကခုန်ဝတ်နှင့်အတူတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာ-သငျ့မှတ်ပုံတင်ပုံစံမဟုတ်ဒါကြောင့်မြင့်။ လူအများဟာကိုဝယ်သူ့ကိုအင်္ကျီ၊အမားတီ-ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူပခုံး၏အခြား။ အနုပညာ ဟန်အနည်းငယ်ကွဲပြားနေသောအခြားဥရောပနိုင်ငံများ။ အပေါ်လမ်းအတွက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်အတွက်မိန်းကလေးများတင်းကျပ်စွာဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဘောင်းဘီ၊ထိပ်နှင့်အတူတစ်ဦးအစွန်းရောက်အ ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နောက်ကျော။ နှင့် တို့တွင်ထိပ်ဆုံးဆယ်မက္ဖြယ္အဝတ်ကိုဝတ်၏။ အအေးရာသီခုနှစ်တွင်၊ရယ်စရာကျော်ယူခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အတူစတင်အပူပေးနည်း။ အင်္ကျီနှင့်အတူတစ်ဦးအဆင်ပြေကိုက်သောမှလုိုက်၏အယူအဆအဆင်ပြေသည်အဝတ်အဒိအမျိုးသမီး၊ဤအရပ်မှ၎င်း၏အသုံးပြုမှုအဖြစ်ကျပန်းအလုပ်နှင့်ကော့တေးဝတ်စုံ။ သူလယ်သမားတို့၏နိုင်ငံသူတို့ကိုဝတ်ဆင်နှင့်အတူဂျင်း၊ဘီႏွင့္-အရှည်ရောက်ရှိသောအခြေကျင်း-အစားဆင်မြန်း၏။ ဝယ်နိုင်အမိန့်များအတွက်ပေးဆောင်အန္အမသိဘူး။ ပျော်ရွှင်သောဘဝအသက်တာများအတွက်သာမန်လူတွေအတွက်ဒိန်းမတ်၊နှင့်အတူတစ်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်တဲ့စီးပွားရေးစနစ်နှင့်အမျှမှုပေးသည်၊အပေါင်းသူတို့ယုံကြည်ကြတယ်။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတွက်အသွင်၊ထုံးစံအပြုအမူ။ ပျမ်းမျှဖောက်သည်နှစ်သက်ဒိအမှတ်တံဆိပ်အဝတ်ကိုဝတ်၏။ ဂင်အတွက်နှင့်အခြားမြို့ကြီးများ၊အများပြည်သူဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်၊ထုတ်လုပ်သူပူဇော်အဝတ်များအတွက်အလယ်အလတ်လူတန်းစား၊နောက်တဖန်အယူအကောင့်သို့စိတ်။ အကြၽန္ုဇိုင်းနှင့်စားသုံးသူများအတွက်အပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်နှင့်အရွယ်အစား:လူငယ်များသည်-သုံးဆယ်၊အဝတ္အထည္မ်ားေအဂ်င္စီမွမိန္းကေလး-ငါးဆယ်။ အစားအစာ ဒိန်းမှတ်တံဆိပ်ရဲ့စုဆောင်းမှု:အမျိုးသမီးရဲ့အင်္ကျီနှင့် မကြာခဏဟောင်းနွမ်းအောက်န္အကြောင်းဖက်၌အရောင်တူ။ ဆင်မြန်း-အဝတ်အထူးအခါသမယသည်၊သွားဖို့သူတို့အဘို့အမင်္ဂလာဆောင်၊၊မွေးနေ့၊အစည်းအဝေး။ မော်ဒယ်များ၏အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ဤအမျိုးအစားများမှာမစဉ်းစားဖို့တိကျတဲ့အရသာဒေသခံစားသုံးသူများ၊ဒါကြောင့်အဆိုးရွားေဒသအဝတ်အရောင်း။ ခပ်သိမ်းသောဒုတိယရိတ္ဒိန္းသူဝင်တစ်ဆိုင်ရှာနေအတွက်ထုတ်ကုန်များ၏အချို့သောအမှတ်တံဆိပ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အမျိုးသားဦးစားပေးပင်လျှင်ရှိပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်စျေးအကြားသူတို့ကိုမညီမျှမှု၊ပြည်တွင်းဝယ်လိုအား။ ထုတ်လုပ်သူရမည်ကိုထိုနိုင်ငံများ၏အဥရောပသမဂ္ဂရောင်းဖို့ရှိပါတယ်။ အခြေခံအစားအ ။ အမျိုးသမီးများမှာအောင်စွမ်းမှာမူလေနရာကပထမတစ်ချက်မှာသူတို့လုပ်သောပစ္စည်းများသူတို့ကကယ်နှုတ်ထင်ရသောမကိုက်၊လေးသူတို့၏သီလနှင့်မိမိတို့အားနည်းချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထား။ အရောင်အဘို့အ၊အလေးပေးအဖြစ်အပေါ်ထားခ်က္တာ။ အနက်ရောင်အရောင်၊သံလွင်၊ဖောင်ဒေးရှင်းများ၊နှင့်အားလုံး၏အရိပ်များအသားေရာင္လည်းပေါ်ပေါ်လာ။ ဤအရောင်များကိုလူကြိုက်များကြရာသီတိုင်း။ တိုင်းပြည်အတွက် အများကြီးစွန့်အမျိုးသမီး၊အဘယ်သူမျှမအံ့အားဖြင့်သီးခြားအကောင့်အတွက်စားသောက်ဆိုင်နှင့်အလွဲဘတ်ဂျက်၏တစ်ဦးဇနီးမောင်။ အတွက်သတို့သမီး၊ဒိန္းမကဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနိုင်ငံ၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကအရမ်းလှတယ်။ ဖြစ်ကြသည်ကိုကြီးထွားလာအရပ်ရှည်ရှည်၊သွယ်၊အဆံ။ သူတို့ကပုံမှန်အတိုင်းအင်္ဂါ၊သောသဘောထား။ ယောက်ျား၏သူတို့ရဲ့လယ်သမားရဲ့ဇနီး။ အဖြစ်၏ဇနီးအဒိအတွက်အသက်ရှင်ဒိန္းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားအမျိုးသား၊မမြင်ယောင်ကြည့်ဖို့ခက်ခဲ။ ယောက်ျားမေတ္တာသည်နှစ်သိမ့်၏စောင့်ရှောက်မှုယူသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်၊တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပင်၊ချမ်းအေး၊အိမ်ထောင်တစ်ခုအတွက်ရိက္ခာနှင့်သွေးအေး၊ငွေမလုံလောက်ဘူး။ အမ်ိဳးမွအားဖြင့်၊အမြဲတမ်းနေအိမ်သို့ဤတိုင်းပြည်တွင်၊အရွက်၏ပုံသဏ္ဌာန်လှပခြင်း၊ဂရုစိုက်တတ်တဲ့အမျိုးသမီး၊အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အိမ်ရှင်မအတွက်ဒိန်းမတ်။ ကိုယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သူမ၏ခင်ပွန်းမပါဘူး။ သူတို့၏စောင့်ရှောက်မှုယူအမြိုးသား-တစ်မိသားစုဘိုးဘွားအမွေ၊သူတို့စောင့်ရှောက်မှုအလုပ်၏နှစ်ဦးစလုံး၏မိဘများ။ နှစ်ဦးစလုံးသုံးစွဲအချိန်အများကြီးနှင့်အတူငယ်။ ဒိန္းပီးအများစုနေထိုင်တဲ့နေ။ အဖက်ဒရယ်အစိုးရပိုင်အယုံအကြည်သို့ပွုသကဲ့သို့အခြားနိုင်ငံများ။ သူတို့ပြုမူ ၊ကျေးလေး၊ပို ။ မရှိဘာသာစကားအခက္အပင်လျှင်အဆိုပါနိုင်ငံခြားသားမပြောတတ်ဒိ။ အဆိုပါဒေသခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်-သင်ရှင်းပြနိုင်။ အဆိုပါသဘောထားကိုနိုင်ငံခြားသားအတွက်အသင်း၊စတိုးဆိုင်အတွက်အတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဓိကအားဖြင့်အပေါ်မူတည်င္ငံျ။ ပါကသူတစ်ဦးသည်ဖော်ရွေများနှင့်ယဉ်ကျေး၊သူတို့စကားကိုနားထောင်မည်၊အဘို့အမေးပါတယ်၊ရှင်းပြတယ်၊ပြီးကူညီ။ ကိုယ့်လိုတခြား။